A PLACE OF KINDNESS AND HAPPINESS!
BREAD FOR BELIEVERS (21)
Sermon Outlines (1)
ကဗျာ၊ ၀တ္တု (2)
G6PD Deficiency ဂလူးကို့စ်ဓါတ် ကျဆင်းတဲ့ ရောဂါ
ဂျီစစ်ပီဒီ အားနည်းရောဂါ G6PD deficiency
ဂျီစစ်ပီဒီ အားနည်းရောဂါက ကိုယ်ခန္ဓာမှာ G6PD လို့ခေါ်တဲ့ အင်ဇိုင်း ဂလူးကို့စ် - စစ် - ဖေါ့စ်ဖိတ် ဒီဟိုက်ဒရိုးဂျနေ့စ် အလုံအလောက် မရတာကို ခေါ်ပါတယ်။ G6PD က သွေးနီဥ red blood cells (RBCs) တွေ ပုံမှန် အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကူညီရပါတယ်။ အများအားဖြင့် ဆေးတွေသောက်ရတဲ့အခါ၊ မတည့်စာ စားမိတဲ့အခါ၊ မကျန်းမာတဲ့အချိန်တွေမှာ ဒီဓါတ်ချို့တဲ့ပြီး သွေးနီဥအားနည်း ရပါတယ်။
ဒီရောဂါရဲ့ လက္ခဏာကို အများအားဖြင့် မတွေ့ရဘဲ၊ သွေးနီဥတွေ ပျက်စီးသွားပြီး သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်မှသာ လက္ခဏာတချို့ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ပြုပြင်ဖြေရှင်းလိုက်မှ လက္ခဏာတွေ ပျောက်သွားပါတယ်။ ဒီအထဲက အနည်းစု တချို့သာ နာတာရှည် သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
မှန်မှန်ကန်ကန် ဂရုစိုက်ပေးမယ်ဆိုရင် G6PD သွေးအားနည်းတဲ့ ကလေးဟာလည်း ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ကလေး ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
G6PD က အင်ဇိုင်းတမျိုး ဖြစ်တယ်။ သူက ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်တွေကို ခွန်အားအစွမ်းအဖြစ် ပြောင်းပေးနိုင်တယ်။ ဆေးသောက်လို့ သို့မဟုတ် ရောဂါတခုခုကို ခုခံနေရချိန်တွေမှာ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဓါတ်သဘာဝတွေကြားမှ သွေးနီဥကို ကာကွယ်ပေးတာ G6PD ပါ။
G6PD ဂလူးကို့စ် ဓါတ်အားနည်းသူဟာ သွေးနီဥကလည်း G6PD ဂလူးကို့စ် ဓါတ်ကို အလုံအလောက် မထုတ်လုပ်နိုင်၊ ထုတ်ပေးတာကလည်း ကောင်းစွာ အလုပ် မလုပ်နိုင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ G6PD ဂလူးကို့စ်က ကာကွယ်မပေးနိုင်တော့ သွေးနီဥတွေ အဖျက်ဆီးခံရ၊ ပျက်စီးရတယ်။ သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်ပြီဆိုရင် အရိုးထဲမှာ သွေးကြောမျှင် အသစ်တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ ရိုးတွင်းချဉ်စီ အပိုင်းတွေက သွေးနီဥတွေ ပြန်ပွါးလာအောင် မလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူး။
G6PD ဂလူးကို့စ်ဓါတ် ကျဆင်းရခြင်း အကြောင်းရင်း
Causes of G6PD Deficiency
G6PD ဂလူးကို့စ်ဓါတ် နည်းရခြင်းဟာ မိဘတပါး သို့မဟုတ် မိဘမျိုးရိုးကြောင့် ဖြစ်ရတယ်။ အားနည်းတဲ့မျိုးရိုးကို လက်ဆင့်ကမ်းတာက X chromosome ပါ။
အာဖရိကန် အမျိုးသားတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက ဒီမျိုးရိုးကို သယ်ဆောင်တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတော့ သူတို့မှာ မပြဘူး။ အမျိုးသမီးအနည်းငယ်လောက်သာ ဒီရောဂါကို ခံစားရတယ်။
အီတလီ၊ ဂရိ၊ အာရပ်၊ ဆက်ဖါးဒစ်အနွယ် ဂျူးလူမျိုး အပါအဝင် မြေထဲပင်လယ်ဒေသ လူမျိုးတွေမှာ အများအားဖြင့် ဖြစ်တတ်တယ်။ ဖြစ်တဲ့နှုန်းတော့ မတူဘူး။ အာဖရိကန်တွေက အပျော့စား ဖြစ်ပြီး၊ မြေထဲပင်လယ် အနွယ်တွေက အပြင်းစား ဖြစ်ကြတယ်။
ဘာကြောင့် လူမျိုးတစုတည်းမှာ ပိုဖြစ်ရသလဲ? အာဖရိကနဲ့ မြေထဲပင်လယ်ဒေသမှာ ငှက်ဖျားရောဂါ အဖြစ်များလို့ပါ။ ငှက်ဖျားဖြစ်စေတဲ့ ကပ်ပါးတမျိုးက G6PD ဂလူးကို့စ် ချို့တဲ့နေတဲ့ သွေးကြောတွေထဲမှာ သိပ်မရှင်သန်နိုင်ဘူးလို့ လေ့လာသူတွေ တွေ့ရှိထားကြတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးအားနည်းခြင်းက ငှက်ဖျားကို ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။
G6PD ဂလူးကို့စ်ဓါတ် ကျဆင်းစေတဲ့ အချက်များ G6PD Deficiency Symptom Triggers
G6PD ဂလူးကို့စ် ချို့ယွင်းတဲ့ ကလေးဟာ သာမန်အားဖြင့် လက္ခဏာ မပြဘူး။ သွေးနီဥတွေ ပျက်စီးလာစေတာကတော့ .......
- ဖျားနာ။ ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်တဲ့အခါ။
- အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ ကိုယ်ပူကျဆေး၊ ရောဂါအမြစ်ပြတ်ဆေး (အများအားဖြင့် sulf ဆိုတဲ့ နာမည် ပါတတ်တဲ့) တွေ သောက်ရတဲ့အခါ။
- ငှက်ဖျားဆေးတွေ သောက်ရတဲ့အခါ (အများအားဖြင့် quine ကွင်းန် ပါတဲ့ဆေးတွေ)
G6PD ဂလူးကို့စ် ချို့ယွင်းတဲ့ ကလေးတချို့ဟာ ဆေးအနည်းအကျဉ်း ဒဏ်ကိုတော့ ခံနိုင်ပါတယ်။ တချို့က လုံးလုံး မခံနိုင်ကြဘူး။ ဆေးဒဏ် ခံနိုင်၊ မခံနိုင်က ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ လိုပါတယ်။
တချို့အရာတွေကို စားလို့မရ။ တချို့အရာတွေက ကိုင်လို့မရပါ။ ပဲစေ့၊ ပဲတောင့်၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ပရုပ်လုံး အမျိုးမျိုးမှာပါတဲ့ naphthalene နက်ဖယ်သလင်းဓါတ်တွေ ဖြစ်တယ်။ ကလေးက ပရုပ်လုံးမြိုမိရင် အန္တရယ်ကြီးလို့ မထိမကိုင်ဖို့ သတိထားရမယ်။
အားနည်းခြင်းရဲ့ လက္ခဏာများ Symptoms of G6PD Deficiency
ဆေးသောက်ထား၊ သွေးနီဥ ပျက်စီးစေတဲ့ ရောဂါရနေပေမယ့် လက္ခဏာက မပြတတ်ဘူး။ စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေရောက်မှ သွေးအားနည်းရောဂါ ပုံစံပြတတ်တယ်။
- ဖြူဖတ်ဖြူရော် (အသားညိုရင် ပါးစပ်မှာ မြင်သာတယ်။ အထူးသဖြင့် လျှာနဲ့ ပါးစပ်)
- အသားဝါခြင်း/ အသားအရေနဲ့ မျက်လုံးဝါခြင်း
- ဆီးအရောင် လဘက်ရည်ရောင် ညိုခြင်း၊
ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ပြုပြင်ဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်း အမြန်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
လက္ခဏာက အပျော့စားဆိုရင် ဆေးကုဖို့ မလိုပါဘူး။ ကိုယ်ခန္ဓာက ပုံမှန် သွေးနီဥတွေ ထုတ်လွှတ်နေတာကြောင့် အမြန်ပျောက်ပါလိမ့်မယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ကြာနေရင်တော့ ဆေးကုသဖို့ လိုပါတယ်။
ဆေးစစ်ခြင်းနဲ့ ကုသခြင်း Diagnosis and Treatment
သာမန်အားဖြင့် အခြေအနေ ပိုမဆိုးလာဘဲ၊ ဆေးကုဖို့ မလိုပါ။ ဆရာဝန်က သံသယရှိမှ ဆေးစစ်ပါ။
မိဘ၊ မျိုးရိုးကြောင့် စိုးရိမ်မိပါက ဆရာဝန်ကို ပြောပြပြီး သွေးစစ်ဖို့ လိုပါမယ်။
ကုရတာက လွယ်ပါတယ်။ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ဖယ်ရှားရုံပါပဲ။ အဖျားအနာကို ကုဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် သောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ ဖြတ်ထားဖို့ပါပဲ။ နာတာရှည် သွေးအားနည်းရောဂါ ဆိုရင်တော့ ဆေးရုံမှာ အောက်စီဂျင်ပေးဖို့ လိုမယ်။ သွေးသွင်းရနိုင်တယ်။ ဂလူးကို့စ် အားနည်းရာကနေ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေလည်း ရောက်သွားနိုင်တယ်။
ပြုစုခြင်း Caring for Your Child
အကောင်းဆုံးက မတည့်တာတွေ ရှောင်ဖို့ပါပဲ။ ဂရုစိုက်ရင် ကျန်းကျန်းမာမာ နေနိုင်ပါတယ်။
Posted by Papa at 1:07 AM
Labels: Health, ကျန်းမာရေး
PRAYER by Dr. John R. Rice- Chapter 05
PRAYING FOR DAILY BREAD
၁။ အစားအစာ၊ အဝတ်အထည်၊ ငွေကြေး၊ မော်တော်ကားနဲ့ တခြားအရာတွေ တောင်းယူခြင်း
သခင်ယေရှုက တပည့်တော်တွေကို ပဌနာတော်ကို သင်ပေးတယ်။ “အသက်မွေးလောက်သော အစာကို ယနေ့ ပေးသနားတော်မူပါ။” (လုကာ ၁၁း ၂၊ ၃)
နေ့စဉ်စားစရာအတွက် ဆုတောင်းဖို့ သွန်သင်တယ်။ စားစရာသာမက တခြားလိုတာတွေလည်း ဆုတောင်းဖို့ ဖြစ်တယ်။ မသဲ ၆း ၉- ၁၃ မှာ ပဌနာတော်ကို တွေ့ရတယ်။ “အသက်မွေးလောက်သော အစာကို ယနေ့ ပေးသနားတော်မူပါ။” ဒီအခန်းမှာပဲ မြေကြီးပေါ်မှာ စည်းစိမ်ဥစ္စာ မစုဆောင်းဖို့ မှာတယ်။ “အဘယ်သို့ စားရမည်ဟု အသက်အဖို့ မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ အဘယ်သို့ ဝတ်ရမည်ဟု ကိုယ်အဖို့ မစိုးရိမ်ကြနှင့်။” မသဲ ၆း ၂၅။ ကောင်းကင်ငှက်တွေအတွက်၊ အစာနဲ့ တောနှင်းပန်းတွေအတွက် အဝတ်ကို ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။ နေ့စဉ်အစာနဲ့ တခြားလိုတာတွေအတွက် ဆုတောင်းဖို့ လိုတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာလိုအပ်ချက်တွေအတွက် ဆုတောင်းဖို့ လိုတယ်။ နေ့စဉ်စားစရာအတွက် ဆုတောင်းခိုင်းတာဟာ ဘုရားက ပေးချင်လွန်းလို့ ဖြစ်တယ်။ ရဲရဲတောင်းသင့်တယ်။
နေ့တိုင်းစားစရာအတွက် ဘုရားပေးလေ့ရှိတာကို ကျမ်းစာထဲမှာ အံ့ဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေအဖြစ် တွေ့ရတယ်။
အစ္စရေးလူမျိုးတွေကို တပတ်မှာ ၆ ကြိမ်၊ နှစ်ပေါင်း ၄၀ လုံးလုံး မန္နမုန့် ကျွေးတယ်။ ထွက် ၁၆း ၃၅။ နေ့တိုင်း ဘုရားကြွေးတာ သတိရစေချင်လို့ အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနမှာ မန္နမုန့်အိုးကို သိမ်းစေတယ်။ ဘုရားစေတနာကို သားစဉ်မြေးဆက် သတိရစေဖို့ ဖြစ်တယ်။ ထွက် ၁၆း ၃၂- ၃၄။ အစ္စရေးတွေဟာ အနှစ် ၄၀ လုံး အဝတ်မနွမ်း၊ ဖိနပ်မပြတ်ဘူး။ တရားဟော ၂၉း ၅။ အသားစားချင်တော့ ငုံးတွေ ချပေးတယ်။ ထွက် ၁၆း ၁၃။ တောလည် ၁၁း ၃၁။ ရေဆာတော့ ကျောက်ထဲက ရေပေးတယ်။ တောလည်ရာ ၂၀း ၁၁။ မာရအရပ်မှာ ခါးတဲ့ရေကို ချိုစေတယ်။ ထွက် ၁၅း ၂၅။
အစားအစာနဲ့ အဝတ်အထည်တွေကို ဆုတောင်းယူနိုင်တယ်။ ရှံဆုံက ဖိလိတ္တိလူ ၁၀၀၀ ကို သတ်ချိန်မှာ ရေဆာလို့ သေမတတ်ဖြစ်တယ်။ ဘုရားက ရေကို စီးလာစေတယ်။ တရားသူကြီး ၁၅း ၁၅- ၁၉။
ဧလိယကို ကျီးအတွေလွှတ်ပြီး အစာကျွေးတယ်။ ၃ရာ ၁၇း ၃- ၆။ ကျီးအတွေက တနေ့ ၂ ကြိမ် မုန့်နဲ့အသား ယူလာပေးတယ်။ အဲဒီနောက် ဇရတ်ပမြို့မှာ မုဆိုးမရဲ့ လက်တဆုပ်စာ မုန့်နဲ့ဆီကို ကောင်းကြီးပေးပြီး ကြွယ်ဝစေတယ်။ ၃ရာ ၁၇း ၉- ၁၆။ လူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို ဘုရားက စိတ်ဝင်စားတယ်။ ပေးသနားတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ ဧလိယကို ကောင်းကင်တမန်အားဖြင့် မုန့်နဲ့ရေ ပေးတယ်။ ၃ရာ ၁၉း ၅- ၇။
သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်း နေ့စဉ်လိုအပ်မှုတွေအတွက် နမိတ်လက္ခဏာတွေ ပြတယ်။ ပထမဆုံး နမိတ်လက္ခဏာက ဂါလိလဲပြည် ကာနမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာ ရေမှ စပျစ်ရည်ဖြစ်စေတယ်။ ယောဟန် ၂း ၁- ၁၀။ ပေတရု၊ ယောဟန်၊ ယာကုပ်တို့ကို အမှုတော်အတွက် ခေါ်ချိန်မှာ ရေနက်ရာအရပ်သို့ ရွေ့ဦးလော့။ ပိုက်ချခိုင်းတဲ့အခါ ငါးအများကြီး ဖမ်းမိတယ်။ ပိုက်ကွန်စုတ်ပြတ်မတတ် ဖြစ်ရတယ်။ လုကာ ၅း ၄- ၈။ ဒါက အစားအစာအတွက် ဖြစ်တယ်။ လူ ၅၀၀၀ ကို မုန့် ၅ လုံး၊ ငါး ၂ ကောင်နဲ့ ကျွေးခဲ့တယ်။ လူ ၄၀၀၀ ကိုလည်း ကျွေးခဲ့တယ်။ ဒါတွေက အစားအသောက်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာတွေ ဖြစ်တယ်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါ ဂါလိလဲပြည်ကို သွားတယ်။ တပည့်တော်တွေ တညလုံး ငါးဖမ်းပေမယ့် မရဘူး။ ငါးရစေချိန်မှာ ငါးကြီး ၁၅၃ ကောင်ရကြတယ်။ ယောဟန် ၂၁း ၁၁။
အဲဒီအချိန်မှာ သခင်ယေရှုက မီးဖိုပြီး သူတို့ကို အိုင်နဘေးမှာ နံနက်စာ ပြင်ပေးတယ်။ ယော ၂၁း ၅- ၁၂။ သခင်ဘုရားက အစားအစာကို စိတ်ဝင်စားပြီး၊ ဆာလောင်သူတွေကို ကျွေးမွေးတယ်။
ဖိလိပ္ပိမြို့သားတွေက အစားအစာ ပို့တဲ့အခါ ရှင်ပေါလု ဝမ်းသာတယ်။ ဧပဖြောဒိတ်လက်မှ ရလို့ အားလုံး ပြည့်စုံနေတယ်လို့ ဆိုတယ်။ မွှေးကြိုင်သောအနံ့နဲ့ ဘုရားသခင် နှစ်သက်တဲ့ယဇ် လို့ဆိုတယ်။ ဘုရားသခင်က သင်တို့ လိုသမျှကို ဖြည့်စွမ်းပေးမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဖိလိပ္ပိ ၄း ၁၈- ၁၉။ ဒီအစားအစာတွေဟာ ကောင်းကင်က ပေးသလို ရှင်ပေါလု ခံစားရတယ်။ ဒီအကျိုးကို သူတို့ ပြန်ခံစားရဦးမယ်လို့ ဂတိပေးတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အရာတွေ မရနိုင်ဘူးလို့ ထင်နေသူတွေ ရှိတယ်။ တချို့က လောကီ ကောင်းကြီးဆိုတာ အစ္စရေးတွေအတွက်ပါ။ ခရစ်ယာန်က ကောင်းကင်အရာပဲ ရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါက မယုံကြည်လို့ အကြောင်းပြတာပါ။ လူကောင်းတချို့လည်း ဒီလို ပြောတတ်တယ်။ ဒီစကား မမှန်ဘူး။ ဓမ္မသစ်ခေတ်မှာလည်း ဓမ္မဟောင်းခေတ်လိုပဲ ယုံကြည်သူတွေကို ဘုရားက ကျွေးမွေးချင်တယ်။ ဘုရားသခင်က မပြောင်းလဲဘူး။ ယာကုပ် ၁း ၁၇ မှာ “ကောင်းမြတ်စုံလင်သော ဆုကျေးဇူးရှိသမျှတို့သည် အလင်းတို့၏ အဘထံတော်မှ သက်ရောက်ရ၏။ ထိုအဘသည် ပြောင်းလဲခြင်းအရိပ်နှင့် ကင်းလွတ်တော်မူ၏။” ဘုရားက စိတ်မပြောင်းလဲဘူး။ ခရစ်ယာန်တွေကို မ,စချင်သေးတယ်။ သားသမီးတွေကို ဂရုစိုက်နေဆဲပဲ။ ပြောင်းလဲမသွားဘူး။
ဝိညာဉ်ရေးကောင်းကြီးတွေကို ဘုရားပေးတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်လိုအပ်နေတဲ့ လောကီအရာတွေကိုလည်း ဘုရားပေးချင်တယ်။
ဂျော့ခ်ျမူးလယ် George Muller ရဲ့ ဘဝအကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်ရင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ဘရစ်စ်တိုမြို့မှာ မိဘမဲ့ဂေဟာတွေ ဆောက်တယ်။ ကလေး ၂၀၀၀ ကျော်တယ်။ အဆောက်အဦဆောက်ဖို့၊ နေ့စဉ် စားဖို့၊ အမှုတော်ဆောင်လစာ စတာတွေအတွက် လိုငွေကို အလှူမခံဘဲ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ မတောင်းဘဲ ဆုတောင်းပြီး ဖြေရှင်းတယ်။ အမှုတော်ဆောင် ရာချီပြီး ပံ့ပိုးနိုင်တယ်။ ကျမ်းစာအုပ် ထောင်ချီပြီး ဝေနိုင်တယ်။ ဝေစာ သန်းနဲ့ချီပြီး ထုတ်ဝေတယ်။ မိဘမဲ့ဂေဟာတွေ ဆောက်တယ်။ သူ့အသက်တာမှာ ဆုတောင်းပြီး ဒေါ်လာ ခုနှစ်သန်း ရခဲ့တယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အလှူမခံ၊ အကူအညီ မတောင်းခဲ့ဘူး။ (George Muller of Bristol ဆိုတဲ့ A. T. Pierson ရေးတဲ့ စာအုပ်)
ဆုတောင်းရင် အစားအစာ၊ အဝတ်အထည်နဲ့ လိုအပ်သမျှ ဘုရားပေးတယ်ဆိုတာ ဂျော့ခ်ျမူးလယ်က သက်သေပြခဲ့ပြီ။
လောကီအရာတောင်းတာဟာ ဝိညာဉ်သဘောမရှိတာလို့ မယူဆပါနဲ့။ နေ့စဉ်စားဖို့ ဆုတောင်း အဖြေရသူဟာ သူတပါး ကယ်တင်ခြင်းရဖို့လည်း ပိုဆုတောင်းချင်လာတယ်။
ဘုရားသခင်က သားတော်ကိုပင် ပေးခဲ့တယ်။ လောကီလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း ပေးချင်တယ်။ ရောမ ၈း ၃၂ မှာ “သားတောရင်းကို မနှမြောဘဲ၊ ငါတို့ရှိသမျှ အဖို့အလို့ငှါ စွန့်တော်မူသောသူသည်၊ သားတော်နှင့်တကွ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ငါတို့အားမပေးဘဲ အဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်း။”
၂။ အစားအစာအတွက် ဆုတောင်းခြင်း အဖြေများ
ဒါက သီအိုရီမဟုတ်ဘူး။ လက်တွေ့ဖြစ်တယ်။ ဒါဝိဒ်က “ဤဆင်းရဲသောသူ၏ အော်ဟစ်ခြင်းအသံကို ထာဝရဘုရား နားထောင်၍” ဆာလံ ၃၄း ၆။ “ခြင်္သေ့တို့သည် ဆင်းရဲ၍ ငတ်မွတ်ခြင်းကိုခံရသော်လည်း၊ ထာဝရဘုရားကို ရှာသောသူတို့၌ ကောင်းသောအရာ တစုံတခုမျှ မလိုရာ။” ဆာလံ ၃၄း ၁၀။ နေ့စဉ်လိုသမျှကို ဆုတောင်းလို့ အဖြေရကြတာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်။ ယုံကြည်သူတွေ ခွန်အားရကြတယ်။ ၁၉၁၆ ခု၊ ဇန်နဝါရီမှာ ကျွန်တော့အသက် ၂၀။ Texas ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းက နွားမွေးတဲ့ Dundee မြို့မှာ ယာခင်းကြီး ရှိတယ်။ ကျောင်းနေဖို့ ဘုရားနိုးဆော်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းစရိတ် မရှိဘူး။ အဖေ့မှာလည်း မရှိဘူး။ ကျွန်တော့မှာတော့ မြင်းတကောင်နဲ့ မြင်းကုန်းနှီးအပြင် ၉ ဒေါ်လာနဲ့ ၃၅ ဆင့်ပဲ ရှိတယ်။ ဘဏ်မှာ ငွေချေးဖို့ ကြိုးစားတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကို အကူအညီတောင်းတယ်။ မြင်းရောင်းဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမယ့် စီးပွါးပျက်တဲ့ ကာလဆိုတော့ မြင်းလည်း ရောင်းမရ။ ပိုက်ဆံလည်း ချေးမရဘူး။ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ဆီးနှင်းတွေကျပြီး အရမ်းအေးတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဆုတောင်းဖို့ တောင်ကုန်းလေးကို တက်သွားလိုက်တယ်။ မျက်နှာအပ်ပြီး ဆုတောင်းတယ်။ “တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ပြီးပြီ ကိုယ်တော်။ ဧဝံဂေလိတရားလည်း ဟောချင်တယ်။ ဓမ္မသီချင်း အဆိုတော်လည်း ဖြစ်ချင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တော်အလိုရှိရာ တခုခု လုပ်ပါမယ်။ ဆယ်ဖို့တဖို့လည်း အမြဲပေးမယ်လို့ ဂတိပေးလိုက်တယ်။ ပေးချင်တဲ့စိတ်ကလည်း ဘုရားထံကလာတာပဲ ဖြစ်မယ်။ ကျောင်းစရိတ်ကို မ,စပါ။ အလိုတော်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေ” လို့ ဆုတောင်းလိုက်တယ်။
အဲဒီအချိန်က Dr. R. A. Torrey ရဲ့ How to pray ဆုတောင်းနည်း ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ခရစ်ယာန်တိုင်း ဖတ်သင့်တယ်။ အမေသေတော့ သူ့လက်ဆွဲအိပ်ကလေး ပို့လိုက်ဖို့ အဖေ့ကို မှာသွားတယ်။ အဲဒီနောက် Texas ပြည်နယ်က Decatur ကောလိပ်ကို သွားတက်တယ်။
ဆုတောင်းတယ်။ ၂၅ မိုင်လောက် ရောက်တဲ့အခါ Texas ပြည်နယ်၊ Archer မြို့က Power State ဘဏ်ကို ရောက်တယ်။ ဘဏ်ငွေကိုင်ကို “ကျောင်းတက်ချင်လို့ မြင်းပေါင်ချင်တယ်” လို့ ပြောလိုက်တယ်။ သူက မြင်းကို မကြည့်ဘဲ “ဘယ်လောက်လိုချင်လဲ” ဆိုပြီး ချက်လက်မှတ်ကို ဆွဲယူတယ်။ တော်တော်အံသြစရာပါ။ တခါမှ မကြုံဖူးဘူး။ “ကျောင်းစရိတ် ပထမအရစ် ဒေါ်လာ ၆၀ လိုတယ်။” ဆိုတော့ …. “ဘယ်လောက်ကြာရင် ပြန်ဆပ်မလဲ” တဲ့။ “၆ လ” လို့ သီးနှံရိတ်မယ့်အချိန်ကိုမှန်းပြီး ပြောလိုက်တယ်။ သူက ၆ လ အချိန်ပေးပြီး၊ ဒေါ်လာ ၆၀ ထုတ်ပေးတယ်။ ဘဏ်ကိုလာတဲ့ တခြားတယောက်က “Mr. Power ခင်ဗျားပြောတော့ ကြပ်တည်းတဲ့အချိန်မို့ ၃ လထက်ပိုပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မချေးနိုင်ဘူး .. ဆို။” လို့ ပြောလာတယ်။
“ဒါပေမယ့် ဒီကောင်လေးက ငါ့မိတ်ဆွေရဲ့ သားကွ” လို့ ဘဏ်အရာရှိက ဖြေတယ်။ သူကို ကူညီဖူးတာက စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတဲ့ ကိုင်းကူး ကိုင်းဆက်နည်းလေး ပြောပြဖူးတာပါ။
ကောလိပ်ရောက်တော့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက အလုပ်မရှိဘူး လို့ ပြောပေမယ့် ဘုရားက အလုပ်တခု ပေးတယ်။ နွားနို့ညှစ်ရတယ်။ စားပွဲထိုးလုပ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းလစာပေးရမယ့်အချိန် ရောက်ပြန်တော့ အသည်းအသန် ဆုတောင်းရတယ်။ မကြာခင်မှာ Dr. J. L. Ward က ခေါ်တယ်။ သူက သိပ်သဘောကောင်းတယ်။ ကောင်းကြီးပါပဲ။ “John ကျောင်းနောက်ကျတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို သင်္ချာသင်ပေးနိုင်မလား။ အက္ခရာနဲ့ ဂျော်မက်တြီမှာ ညံ့နေတယ်။” လို့ ပြောတယ်။ စာသင်ရတယ်။
ဒါပေမယ့် အကျီ င်္၊ ဘောင်းဘီတွေက ပေါက်ပြဲနေတယ်။ ညမှာ ဘောင်းဘီအပေါက် ဖာရတယ်။ ပါးလွန်းတော့ မခိုင်တော့ဘူး။ လမ်းလျှောက်ရင် အဖါရာကွယ်ဖို့ ဦးထုပ်နဲ့ ကာရတယ်။
တညတော့ အခန်းဖေါ် Riley Whatley ကို ပြောတယ်။ “အင်္ကျီမရှိရင်တော့ ကျောင်းထွက်ရတော့မယ်။ အင်္ကျီတွေက ဖါရာတွေနဲ့ချည်းပဲ။” Riley က ဆုတောင်းဖို့ အကြံပေးတယ်။ အခန်းဖေါ် ၃ ယောက် ဆုတောင်းကြတယ်။ ဘုရားက စိတ်ချမှုပေးတယ်။ အဲဒီညက သောကြာညပါ။ တနင်္ဂနွေနေ့ခင်းမှာ ဟိုအဝေး Texas ပြည်နယ် Gainesville မှာနေတဲ့ ဦးလေးက ဖုန်းခေါ်တယ်။ သူက စေတနာကောင်းတယ်။ သဘောကောင်းတယ်။ “John အဝတ်အစားဝယ်ဖို့ ငွေဘယ်လောက်လိုလဲ” လို့ မေးလာတယ်။ “ကျွန်တော့မှာ အဝတ်အစားဝယ်ဖို့ ငွေလိုတာ ဦးလေး ဘယ်လိုသိသလဲ” လို့ မေးလိုက်တယ်။ “ဟာ …. ကျောင်းသားတွေမှာ အင်္ကျီအဝတ်အစား အမြဲလိုတာပဲ” လို့ ပြောလာတယ်။ ၁၅ ဒေါ်လာ လိုတယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ ချက်လက်မှတ်မှာ ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးတယ်။ အင်္ကျီအပြာရောင်တထည်၊ ဦးထုပ်တလုံး၊ ဖိနပ်တရံကို ဒေါ်လာ ၂၀ နဲ့ ဝယ်လိုက်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီငွေတွေအားလုံး ပြန်ဆပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဆုတောင်းရင် ရတယ် ဆိုတာက စိတ်ပျော်စရာ ဖြစ်လာတယ်။ ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်နဲ့ ကျမ်းစာကျောင်း ၂ နှစ် တက်ချိန်မှာပါ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ကျောင်းမတက်ရတာမျိုး မရှိတော့ဘူး။ ကျောင်းတက်ဖို့ ထောက်ပံ့တဲ့သူ ရှိနေတဲ့ဘဝမျိုးပါ။
ဘုရားသခင်က မပြောင်းလဲဘူး။ ဆုတောင်းသံကို နားထောင်ပေးနေတယ်။ ၁၉၄၁၊ ဇန်နဝါရီလ Nebraska ပြည်နယ် Grand Island မှာ ရေဒီယိုအစီအစဉ်တခုမှာ ဟောပြောရင်း အခုန အဖြစ်အပျက်လေးကို ပြောပြဖြစ်တယ်။ Kansas State ကောလိပ်မှာတက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတယောက်က စိတ်ညစ်နေတယ်။ အဲဒီရေဒီယိုကို နားထောင်နေတယ်။ သူ့ကျောင်းက မကောင်းတာ၊ အကျင့်ပျက်နေတာ၊ အယူလွဲနေတာတွေကို စိတ်ညစ်နေတယ်။ Wheaton ကောလိပ်ကို တက်ချင်နေတယ်။ ပိုက်ဆံကမရှိဘူး။ ဘုရားအဖြေပေးတာ ကြားရတော့ သူလည်း ဆုတောင်းတယ်။ အခန်းဖေါ် ဝင်လာချိန်မှာ သူ့အဝတ်အစားတွေ သိမ်းနေပြီ။ ပိုက်ဆံမရှိပေမယ့် ဘုရား မ,စမယ်လို့ သူယုံတယ်။ ကျောင်းစရိတ်နဲ့ အခန်းခကို ဘုရား ဖြည့်စွမ်းမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါနဲ့ Wheaton ကောလိပ်ကို သွားတယ်။ ရောက်ပြီး ၂ နာရီအကြာမှာ အလုပ်တခုရတယ်။ ကျောင်းစရိတ် ပေးနိုင်လာတယ်။ ဒီအကြောင်း ကျွန်တော့ကို ပြန်ပြောပြပြီး အခု ကျွန်တော့ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်။
၁၉၂၆ မှာ သင်းအုပ်ဘဝ အနားယူပြီး အချိန်ပြည့် ဧဝံဂေလိအမှုဆောင်လိုက်တယ်။ ပိုဆက်ကပ်ဖို့ လိုလာတယ်။ “ကိုယ်တော့်အလုပ်ကို ကျွန်တော်တာဝန်ယူမယ်။ ကျွန်တော့မိသားစုကို ကိုယ်တော်တာဝန်ယူပေးပါ” လို့ ဆုတောင်းလိုက်တယ်။ အသက်အာမခံ ဒေါ်လာ တသောင်းကို သုံးလိုက်တယ်။ လူကို အားမကိုးဘဲ၊ ဘုရားကိုပဲ အားကိုးဖို့ ဇနီးသည်နဲ့ သဘောတူထားကြတယ်။ ပုံမှန်လစာမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ အဲဒီ ၁၅ နှစ်လုံး ကျွန်တော့မိသားစုကို ဘုရား မ,စတယ်။ သမီး ၆ ယောက်၊ အားလုံး ၈ ယောက်ရှိတယ်။ လိုလေသေး မရှိခဲ့ဘူး။ အမှုတော်ဆောင်တွေကို ထောက်ပံ့နိုင်တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်တာကာလမှာ စာပေထုတ်ဖို့ ဒေါ်လာ ၃၆၀၀ ပေးနိုင်တယ်။ ပုံနှိပ်စရိတ် တလ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပေးရတယ်။ ရေဒီယိုအလုပ်လည်း ရှိတော့ နေ့တိုင်း ပိုက်ဆံကုန်တယ်။ ပြေလည်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ဆုတောင်းလို့ ရတာဖြစ်တယ်။
၁၉၃၁- ၃၂ မှာ ၆ လတာ ကာလအတွင်း နေ့စဉ် ရေဒီယိုလွှင့်ရတယ်။ တနေ့ ၂၅ ဒေါ်လာကုန်တယ်။ မိသားစုစရိတ်ရှိတယ်။ စာပေထုတ်ရတယ်။ ဒါတွေကို ဆုတောင်းပြီး ဖြေရှင်းရတယ်။ ထောက်မမယ့် အသင်းတော် မရှိဘူး။ အလှုငွေမခံဘူး။ ရေဒီယိုကနေလည်း အလှုငွေထည့်ဖို့ မတောင်းခံဘူး။ ဒီရေဒီယိုဟာ စေတနာရှင်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်တယ်လို့ပဲ ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့တိုင်း ဆုတောင်းပြီး ဖြေရှင်းရတယ်။ တနေ့တော့ ဝန်ထမ်းစရိတ် ဒေါ်လာ ၃၀ လိုတယ်လို့ ဆုတောင်းတယ်။ မနက်ပိုင်း စာတွေဝင်လာတော့ အလှုငွေ ၁၃.၅ ဒေါ်လာပါတယ်။ နေ့ခင်းစာတွေမှာတော့ အလှုငွေ မပါဘူး။ မွန်းလွဲပိုင်းစာတွေမှာလည်း အလှုငွေမပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့က ဒေါ်လာ ၃၀ လိုတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အမျိုးသမီးတယောက် ရောက်လာတယ်။ ရေဒီယိုကြောင့် ခွန်အားရတယ်လို့ ပြောတယ်။ တဒေါ်လာ ပေးတယ်။ ဆရာ တရားဟောတာ စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူးတဲ့။ ပြောရင်း မျက်ရည်ကျလာတယ်။ တဒေါ်လာ ပြန်ပေးပါ ဆိုပြီး၊ ၅ ဒေါ်လာပေးတယ်။ ကျွန်မအိမ်နီးချင်း ကက်သလစ် တယောက်လည်း ဆရာ့တရားကြောင့် ခွန်အားရတယ်၊ အခုတော့ ကယ်တင်ခြင်းရပြီနဲ့တူတယ်။ ဆရာ့ရေဒီယိုကြောင့် လူတွေ အကျိုးရှိတယ် ဆိုပြီး၊ ၅ ဒေါ်လာ ပြန်တောင်းကာ ၁၀ ဒေါ်လာပေးတယ်။ နောက်တော့ သူ့အမျိုးသားလည်း ရေဒီယိုကြောင့် ခွန်အားရတဲ့အကြောင်း သူ့အမျိုးသားကလည်း အခုအလှုငွေပေးတာကို ဝမ်းသာမယ်ထင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ မျက်ရည်တွေဝဲလာပြီး၊ ၅ ဒေါ်လာရော၊ ၁ ဒေါ်လာရော၊ အကြွေတွေပါ ပေးသွားတယ်။ သူပြန်ပြီးနောက် ကျမ်းစာသင်ခန်းစာ ဆက်ရေးနေတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ၁၃.၅ ဒေါ်လာရယ်၊ ၁၀ ဒေါ်လာ၊ ၅ ဒေါ်လာ၊ ၁ ဒေါ်လာနဲ့ ဆင့် ၅၀ ကို ပေါင်းကြည့်တော့ ဒေါ်လာ ၃၀ အတိဖြစ်နေတယ်။ အရမ်းပျော်သွားတယ်။ လိုတာကလည်း ဒေါ်လာ ၃၀ ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဆုတောင်းရင် ဘုရားက ပေးတယ်လို့ အတွေ့အကြုံအရ သိနေတယ်။
၁၉၃၂၊ ဇူလိုင်လ၊ လက်ထဲမှာ ၁၀ ဒေါ်လာအပြည့်တောင်မရှိဘဲ၊ Dallas ကို သွားတယ်။ လေဟာပြင်တရားဟောပွဲ ကျင်းပပြီး၊ အသင်းတော်သစ် စဖို့ဖြစ်တယ်။ ကူညီမယ့်သူ မရှိ။ အသိမိတ်ဆွေ မရှိ။ ထိုင်ခုံနဲ့ လျှပ်စစ်မီးအတွက် ငွေမရှိ။ မြေကွက်လပ်တခုကို ပထမအပတ်အတွက် ၅ ဒေါ်လာနဲ့ ငှါးလိုက်တယ်။ ဝိုင်းကူဖို့ နိုးဆော်လိုက်တယ်။ ထိုင်ခုံတွေ ရောက်လာတယ်။ အလုပ်စနိုင်သွားတယ်။ ဘုရားကျောင်း အကြီးကြီး ဆောက်ဖြစ်သွားပြီး၊ အသင်းသား ၁၄၀၀ ကျော်အထိ တိုးလာတယ်။ ၇ နှစ်ခွဲအတွင်း သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သူ ထောင်ချီ ရှိခဲ့တယ်။ စိုးရိမ်ခဲ့ပေမယ့် ဆုတောင်းတဲ့အခါ ဘုရားက ပေးပါတယ်။ ကားတစီးရဖို့ ဆုတောင်းတာ မမြော်လင့်ဘဲ ၃ ရက်အတွင်း ရတယ်။ စီးပွါးရေးကြပ်တည်းတဲ့ကာလဖြစ်ပေမယ့် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန် ချက်လက်မှတ် ရောက်လာတယ်။ မမြင်ဖူး၊ မတွေ့ဖူး၊ စကားတခွန်းမှ မပြောဖူးတဲ့ လူတယောက် ပေးတာဖြစ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်က ဘုရားကို လုံးလုံးအားကိုးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်ကစပြီး၊ လိုသမျှ ဆုတောင်းပြီး လောကီ အသုံးအဆောင်တွေ အံ့သြဖွယ် ရတယ်။ အခုသတင်းပတ်မှာလည်း ပုံနှိပ်ခ ဒေါ်လာ ၅၀၀ လိုနေတယ်။ C. T. Studd ရဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်နေတုန်း၊ လိုတဲ့ငွေ ဘယ်လောက်လဲလို့ မသိခင်မှာဘဲ ဘဏ်မှာရှိတဲ့ငွေနဲ့ ပေးချေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ လက်ထဲမှာ စာအုပ်ဖိုးတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မလောက်ဘူး။ အဲဒီချိန်မှာ မစ္စစပီပြည်နယ် အသင်းတော်တပါးက ၂၅ ဒေါ်လာတန် ချက်လက်မှတ်နဲ့ စာတစောင် ပို့လိုက်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က သူတို့အသင်းတော်မှာ တရားဟောတုန်း ပေးခဲ့တဲ့အလှုငွေထက် ပိုပေးသင့်တယ်ထင်လို့ ထပ်ပေးတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင်ရဲ့ အချိန် timing က ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပေးစရာ ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကို ပေးနိုင်သွားတယ်။ ကိုယ်လိုသမျှ ငွေကြေးမှအစ ဘုရားပေးတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေတခုပါ။ ကိုယ်လိုသမျှ အစားအစာ၊ ငွေကြေးမှအစ ဘုရားက ပေးနေကျပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဆုတောင်းရင် အစားအစာ၊ အဝတ်အထည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ အကြွေးပေးစရာ ငွေကြေးက အစ ဘုရားပေးတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါ။ “သင်တို့သည် ဆုကျေးဇူးကိုရမည်ဟု ယုံကြည်သောစိတ်နှင့် ဆုတောင်းသမျှတို့ကို ရကြလိမ့်မည်။” မာကု ၁၁း ၂၄။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ပိုက်ဆံရမယ်လို့ ပြောတာပါ။ “ငါ၏နာမကို အမှီပြု၍ တစုံတခုသောဆုကို တောင်းလျှင်၊ တောင်းသည့်အတိုင်း ငါပြုမည်။” ယောဟန် ၁၄း ၁၄။ ဒါကလည်း လောကမှာနေစဉ် ကိုယ်လိုတာ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘုရားသခင်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါကြောင့် ရိုးသားစွာ ဆုတောင်းတတ်ဖို့ ဘုရားသခင် သွန်သင်ပေးနိုင်တယ်။ “အသက်မွေးလောက်စောအစာကို ယနေ့ ပေးသနားတော်မူပါ” လို့ ဆုတောင်းတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
Posted by Papa at 12:19 AM
Labels: John R. Rice, PRAYER
Two Lost Sons - ပျောက်သောသား ၂ ယောက်
by Ray Baker
(2018, January 21, Y.P Service တွင် ဟောပြောသော တရားဖြစ်ပါသည်။)
ပျောက်သားသားကို prodigal son လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားမှာ prodigal ကို သိပ်သုံးလေ့ မရှိဘူး။ ပျောက်သောသားဥပမာကို ပြောမှပဲ သုံးကြတဲ့အတွက်၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောနေသူတွေပင် အဲဒီစကားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိပ်မသိကြဘူး။ prodigal ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က wasteful အသုံးအဖြုန်းကြီးတာပါ။ ဒီဥပမာမှာ အသုံးအဖြုန်းကြီးတဲ့သားအကြောင်းပဲ သင်ခန်းစာယူတတ်ကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်မေတ္တာနဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို မနှမြောဘဲ ဖြုန်းနေတဲ့ အဖေတယောက်လည်း ပါတယ်။ သားအကြီးဆိုတဲ့ အရိုက်အရာကို တန်ဖိုးမထား၊ ကိုယ်ဘဝရဲ့ အခွင့်အရေးကို ဖြုန်းပစ်နေတဲ့ အကိုကြီးလည်း ပါတယ်။
ဟိုးတုန်းက မိတ်ဆွေတယောက် ရှိတယ်။ အသင်းသား ရာနဲ့ချီတဲ့ အသင်းတော် အလတ်တန်းစာမှာ သင်းအုပ်ပါ။ အမှုတော်က အဆင်ပြေသလို၊ ကျမ်းစာကျောင်းလေး တကျောင်းမှာ အချိန်ပိုင်း ဆရာပါ။ တနင်္ဂနွေ တမနက်မှာတော့ သူက တရားဟောဖို့ တက်လာတယ်။ ပျောက်သောသားအကြောင်း ဖတ်တယ်။ “ဒီနေ့ ကျွန်တော် သင်းအုပ်အဖြစ်ကနေ နှုတ်ထွက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော့မိန်းမကို ထားခဲ့ပြီး နောက်အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော် ပျောက်သောသား လုပ်တော့မယ်။” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ တရားပလ္လင်ပေါ်က ဆင်းပြီး အသင်းတော်ကို စွန့်၊ မိန်းမနဲ့ ဆယ်ကျော်သက် သမီး ၂ ယောက်ကို ထားခဲ့ပြီး ကားမောင်း ထွက်သွားပါတော့တယ်။
တခြားမြို့မှာ နောက်အိမ်ထောင်နဲ့ သနားစရာဘဝနဲ့ အသက်ရှင်တယ်။ သင်းအုပ်ဆရာပဲ လုပ်ဖူးရှာတယ်။ ပညာမတတ်၊ ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ် မရှိ။ ကားဟောင်း အရောင်းအဝယ် လုပ်ရတယ်။ ဒီမှာတော့ မသိဘူး။ ကားအဟောင်း ရောင်းဝယ်တဲ့သူကို လူတွေ မယုံကြဘူး။ ကားကောင်းတယ်လို့ ပြောပြီး၊ ဈေးပိုတောင်းတယ်၊ လိမ်တယ်လို့ လူတွေ ယူဆကြတယ်။
အသင်းတော်ကတော့ ဖရိုဖရဲဖြစ်သွားတာပေါ့။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကုစားဖို့ ကြိုးစားကြပေမယ့် ဒီနေ့ထိ အနာကျက်လှတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ မိသားစုလည်း ပြိုကွဲတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သမီးတယောက်က အိမ်ထောင်ပြုတယ်။ မင်္ဂလာပွဲမှာ အဖေကို မဖိတ်ဘူး။
အခုဥပမာတော်မှာ အဖေတယာက်နဲ့ သားနှစ်ယာက် တွေ့ရတယ်။ တနေ့တော့ သားအငယ်က အဖေ့ထံမှာ အမွေတောင်းတယ်။ သာမန်အားဖြင့် အမွေဆိုတာ အဖေသေမှ ရမှာပါ။ လိမ္မာတဲ့သားသမီးဆိုရင် အဖေ အသက်ရှင်တုန်း၊ ကျန်းမာနေတုန်း အမွေတောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ပုံက အဖေကို သေစေချင်နေတဲ့ပုံပါ။ “အဖေ့ကို သေစေချင်ပြီ။ ဒါမှ ငါအမွေရမယ်။” လို့ ပြောသလို ဖြစ်နေတယ်။ သားအငယ် အမွေတောင်းတာက ရှက်စရာပါ။ မိသားစုအတွက်ရော၊ သူ့ကိုသူပါ သိက္ခာကျစေပါတယ်။ အမွေတောင်းပြီး အိမ်ကထွက်သွားတာဟာ မိဘကို ပြုစုဖို့ ဘုရားပေးတဲ့ အခွင့်အရေးကို ပစ်ပယ်လိုက်တာပါ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အဖေကတော့ သားငယ်ရဲ့ အရှက်မဲ့တောင်းသမျှကို ပေးတယ်။ ညီအကိုနှစ်ယောက်ကို အမွေခွဲပေးတယ်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ မူရင်းဂရိ အသုံးအနှုန်းက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်။ အဖေက သူ့အသက် life ကို ခွဲပေးတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီသားအတွက်တော့ အဖေ့အသက်ဟာ အဓိပ္ပါယ် မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုရမှာပါ။
သားအငယ်က နိုင်ငံရပ်ခြားကို ထွက်သွားတယ်။ ငွေတွေ သုံးဖြုန်းရင်း ဆိုးမိုက်နေတယ်။ ကျမ်းစာကတော့ အတိအကျ မပြောဘူးပေါ့။ နောက်ပိုင်း သူ့အကို စွပ်စွဲချက်အရ ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ ပျော်ပါးနေတယ် လို့ ဆိုတယ်။ ဟုတ်မှာပါ။ အရက်တွေ သောက်နေမှာပေါ့။ မူးယစ်ဆေးတွေ သုံးမှာပေါ့။ ပြိုင်ကားတွေ ဝယ်။ ဟိုခေတ်ဆိုတော့ ကုလားအုတ်တွေ ဝယ်မှာပေါ့။ ပိုက်ဆံရှိတုန်းတော့ နာမည်ကြီးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံတွေ ကုန်သွားပြီ။ ဘယ်မှာလဲ သူငယ်ချင်းတွေ? သူလက်ဆောင်တွေ ပေး၊ ဟိုတယ်တွေမှာ ပါတီပွဲတွေ ငွေအကုန်ခံ ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ လူတွေ အခု ဘယ်မှာလဲ? အခုတွေ မတွေ့ရတော့ဘူး။
အိမ်မှာနေတော့ သားဘဝမှာ ရပိုင်ခွင့်နဲ့အတူ တာဝန်တွေ ရှိတယ်။ သူက ရပိုင်ခွင့်ပဲ လိုချင်တယ်။ တာဝန်မယူချင်ဘူး။ တာဝန်တွေကို လုံးလုံးစွန့်ခွါသွားတယ်။ လွတ်လပ်ချင်လို့ အဝေးကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ ပိုဆိုးတဲ့ ကျွန်ဘဝရောက်သွားတယ်။ တက်မက်မှုတွေကို မချုပ်ထိန်းနိုင်တော့ အဖေ့မေတ္တာနဲ့ရတဲ့ ကိုယ့်လွတ်လပ်မှုကို အလဲအထပ် လုပ်သွားတယ်။
ကိုယ်အရှက်အကြောက်ဆုံး၊ အရွံမုန်းဆုံးအရာက ဘာဖြစ်မလဲ? မိဘနဲ့မိတ်ဆွေတွေ သိမှာ အကြောက်ဆုံး အဖြစ်က ဘာဖြစ်မလဲ? အဲဒါတွေထက် ပိုဆိုးတာကို ကြုံခဲ့ရရှာတယ်။
အဖေ့ငွေကို ဖြုန်းပြီး အဝေးမှာ ရောက်နေပြီ။ လူရှုပ်ထွေးပြီး စည်ကားနေတဲ့ ဘန်ကောက်မြို့ကြီးလို နေရာမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ငွေကုန်တော့ တယောက်တည်း ဖြစ်ပြီ။ စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးအလုပ်ကို လုပ်ရရှာပြီ။
လိမ်မာတဲ့ဂျူးလူငယ်တယောက်အတွက် ရှက်စရာအကောင်းဆုံးအလုပ်က ဝက်ကျောင်းရတာပဲ။ ဝက်ကို ညစ်ညူးတယ်လို့ သဘောထားတယ်။ ဝက်ကျောင်းရတယ်ဆိုတာ ကျိန်ခြင်းခံရတာပဲလို့ ဂျူးရဗ္ဗိဆရာ တယောက်က ဆိုတယ်။ ဒီထက်ဆိုးတာ ရှိသေးတယ်။ ဝက်ကျောင်းရရုံမက ဗိုက်ဆာနေတယ်။ ဝက်တွေစားနေတဲ့ ပဲတောင့်ကိုပင် စားချင်နေတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ “ငါ ဘာလို့ ဒီလိုဖြစ်နေရလဲ? ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ” လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးလာတယ်။ အဖေ့အိမ်က အစေခံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မိတယ်။ သူတို့မှာ ငွေကြေး၊ အစားအစာနဲ့အတူ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိတယ်။ ဒါနဲ့ အဖေ့အိမ်ကို ပြန်ပြီး အစေခံကျွန်လိုပဲနေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အရင်ကတော့ မာနနဲ့ အမွေတောင်းတယ်။ အခုတော့ စိတ်လိုလက်ရ အနိမ့်ဆုံးမှာနေပြီး အဖေ့စကားကို အစေခံကျွန်လို နားထောင်မယ်။
အဖေ့အိမ်နားရောက်တာနဲ့ အဖေကမြင်ပြီး ပြေးထွက် နှုတ်ဆက်လာတယ်။ ကျမ်းစာကမပြောပေမယ့် အဖေက သားပြန်အလာကို စောင့်မြော်နေပုံရပါတယ်။
ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းတဲ့ အရှေ့တိုင်းအဖေဆိုတာ အိမ်ပြေး သားဆိုးကို သိက္ခာကျခံ ပြေးတွေ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ (၁၁း ၂၀) အရှက်သိက္ခာထိန်းချင်ရင် သူ့သားကို အလုပ်လာတောင်းတဲ့ သူတောင်းစားလိုသာ ဆက်ဆံဖို့ ရှိပါတယ်။
ကြိုတွေးထားတဲ့စကားလည်း သားက မပြောဖြစ်ပါဘူး။ အဖေက အစေခံတေါကို ပါတီပွဲကြီး ကျင်းပခိုင်းတယ်။ ပွဲနေ့ပွဲထိုင် ဝတ်ရုံကို ဝတ်ဆင်စေတယ်။ လက်စွပ်စွပ်ပေးတယ်။ လက်စွပ်က အခွင့်အာဏာနဲ့ တာဝန်ရှိသူ ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ဖိနပ်စီးစေတယ်။ အဲဒီခေတ်က ကျွန်တွေဟာ ဖိနပ်မစီးဘဲ ခြေဗလာနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတယ်။
ပွဲကြီးကျင်ပမယ်။ အတီးအမှုတ်နဲ့ အစားအသောက်တွေပါမယ်။ ဆူဖြိုးတဲ့ နွားတကောင်သတ်တယ်။ တရွာလုံးကို ဖိတ်ချင်တာပါ။ မိသားစုတစုအတွက်ဆိုရင် နွားတကောင်ဟာ များတာပေါ့။ နွားကလည်း မွေးနေ့တို့ မင်္ဂလာဆောင်တို့အတွက် မွေးထားတာမျိုးပါ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်လေ၊ သေတဲ့သားက ပြန်ရှင်တော့ မွေးနေ့ပေါ့။
အကို၊ အမတွေ ရှိတဲ့သူ ရှိသလား? ဒီလိုဘဝကို ကျွန်တော် မခံစားဖူးဘူး။ ကျွန်တော်က အကိုအကြီးဆုံး။ ညီနှစ်ယောက် ရှိတယ်။ ကျွန်တော့ဘဝက ဒီဥပမာတော်ထဲက အကိုကြီးလိုပဲ။ ကျွန်တော်က ဘာပြဿနာမှ မလုပ်တဲ့ လူကောင်း။ ကျောင်းစာကြိုးစားတော့ အမှတ်အမြဲကောင်းတယ်။ ညီတွေအဖို့တော့ မလွယ်ဘူး။ အကိုလောက်မတော်ဘူးဆိုပြီး ဆရာတွေရဲ့ အပြောခံရကြတယ်။
ဥပမာတော်ထဲမှာ အကိုက အိမ်မှာပဲနေတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းတယ်။ ပြဿနာမရှာဘူး။ ဒါပေမယ့် ငွေယူပြေးတဲ့ ညီငယ်ကို စိတ်ဆိုးတယ်။ ပြန်လာတော့ အဖေက သူ့အတွက် ငွေတွေ ဖြုန်းနေပြန်တယ်။
အကိုက သွှူအဖေအိမ်မှာလုပ်ရတာကို ကျွန်လို သဘောထား သုံးနှုန်းတယ်။ အခမရဘဲ နှစ်နဲ့ချီပြီး ကျွန်ခံရတယ်တဲ့။ သူက ကျွန်လိုနေတယ်။ သားလို မဟုတ်ဘူး။ အကိုကြီးရဲ့ ပြဿနာက ကိုယ့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပဲ။
သူ့ခမျာ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ပျော်ဖို့ ဆိတ်တကောင်တောင် မရဘူးတဲ့။ ရှိသမျှ သူပိုင်တာ သူမသိရှာဘူး။ သားဆိုတာ ရပိုင်ခွင့်ရော၊ လွတ်လပ်မှုပါ ရှိတာ သူမသိရှာဘူး။
ဒီဖြစ်ရပ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ irony “ကပြောင်းကပြန်” ရီစရာတခု ဖြစ်လာတယ်။ အိပ်ပြင်က သားငယ်က အတွင်းရောက်။ အတွင်းက သားကြီးက အပြင် ပြန်ရောက်သွားတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ သားကြီး ဘယ်လိုတုန့်ပြန်လဲတော့ မသိရပါဘူး။ စိတ်ပြန်ပြေပြီး ညီကို လက်ခံသလား? အသနားပိုတဲ့ အဖေနဲ့ ညီကို စိတ်ဆိုးနေတုန်းလား? မသိရပါဘူး။
ဒီဥပမာတော်ဟာ လုကာ ၁၅ ရဲ့ ပျောက်တဲ့အရာ သုံးခုထဲမှာ ဇာတ်ရှိန်အမြင့်ဆုံးပါပဲ။ ပျောက်သောသိုး၊ ပျောက်သောဒင်္ဂါးနဲ့ ပျောက်သောသားပါ။ သိုးက တရာမှာ တကောင်ပျောက်တယ်။ ၁% ပါ။ ဒင်္ဂါးက ဆယ်ပြားမှာ တပြားပျောက်တယ်။ ၁၀% ပါ။ သားနှစ်ယောက်မှာ တယောက်ပျောက်တယ်။ ၅၀% ပါ။ ကျွန်တော်အထင်တော့ သားနှစ်ယောက်က တနည်းမဟုတ် တနည်းနဲ့ ပျောက်နေကြတာပါ။
ပျောက်သောသိုးရဲ့ အဆုံးမှာ “ဖြောင့်မတ်၍ နောင်တရစရာအကြောင်း မရှိသောသူ ကိုးဆယ့်ကိုးယောက်တို့ ကောင်းကင်သားတို့သည် ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ထက်၊ နောင်တရသော လူဆိုးတယောက် သာ၍ ဝမ်းမြောက်ခြင်း ရှိကြသည်။” လုကာ ၁၅း ၇။
ပျောက်သောဒင်္ဂါးရဲ့အဆုံးမှာ “ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည် နောင်တရသော လူဆိုးတယောက် ဝမ်းမြောက်ခြင်း ရှိကြသည်။” လုကာ ၁၅း ၁၀။
ဒါပေမယ့် ပျောက်သောသားရဲ့အဆုံးမှာတော့ အကိုက ဝမ်းမမြောက်တော့ ပျောက်သောသားတွေ ဖြစ်နေတယ်။
သခင်ယေရှုက အကိုကြီးဆိုတာ ဖါရိရှဲတွေကို ပြောလိုပုံရတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းတယ်လို့ ထင်နေသူတွေလေ။ သန့်ရှင်ဟန်ဆောင်ပေမယ့် အတွင်းမှာက အပြစ်နဲ့ ပြည့်နေတယ်။ ပညတ်တွေကို စောင့်ထိန်းပေမယ့် ပညတ်တွေကို ငြူစူနေတယ်။ ဘုရားလူမျိုးတော်ရဲ့ ကောင်းကြီးနဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို နားမလည်ဘူး။
သခင်ယေရှုက အခွန်ခံတွေ၊ အပြစ်သားတွေနဲ့ အချိန်ယူခဲ့တယ်။ အောက်ဆုံးက လူတွေ။ ဘုရားနဲ့ဝေးတဲ့ ညီငယ်တွေ။ သခင်ယေရှုက အခွန်ခံတွေ၊ အပြစ်သားတွေနဲ့နေတော့ ဖါရိရှဲတွေက ညီကိုသနားတဲ့ အဖေ့မေတ္တာကို အကိုကြီးစိတ်ဆိုးသလို စိတ်ဆိုးကြတယ်။
အဖေကတော့ ချစ်ဆဲ၊ စောင့်ကြည်ဆဲ၊ စောင့်စားနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဘုရားသခင်ပါပဲ။ ဘာတွေပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ အိမ်ပြန်လာသူကို ဘုရားသခင်က ဘယ်တော့မှ မငြင်းပယ်ပါဘူး။
အပြစ်သားပြန်လာချိန်မှာ ကောင်းကင်ဘုံမှ အဘဘုရားသခင်က အပြစ်မတင်ဘူး။ အပြစ်မပေးဘူး။ အစေခံကျွန်ဘဝအဖြစ် အဆင့်လျှော့မချဘူး။ ချစ်တဲ့သားတယောက်အဖြစ် လက်ခံပြီး၊ သားတယောက်ရဲ့ အဆောင်ယောင်၊ အခွင့်အရေးတွေ အကုန်ပေးပါတယ်။
တချို့က အကိုကြီးနဲ့ တူမယ်။ စည်းကမ်းအားလုံး လိုက်နာနိုင်တဲ့ ခရစ်ယာန်ကောင်းတွေပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ ခါးသည်းနေမယ်။ စိတ်ဆိုးနေတာ နှစ်ချက် ရှိမယ်။ ၁။ စည်းကမ်းတွေများလွန်းလို့ စိတ်ပျက်နေမယ်။ စည်းကမ်းတွေ၊ ပညတ်တွေကို လိုက်နာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကြိုက်၊ မနှစ်သက်ဘူး။ ကောင်းဟန်ဆောင်နေမယ်။ ၂။ တခြားသူတွေအပေါ်မှာ ပြတဲ့ ဘုရားရဲ့ သနားဂရုဏာကို စိတ်ပျက်နေမယ်။ မဟုတ်တာလုပ်ရင် ဒုက္ခ တွေ့စေချင်မယ်။ ဘုရားကျောင်းမှာ သူရဲကောင်းလို အားရဝမ်းသာ မကြိုဆိုစေချင်ဘူး။
တချို့က ညီငယ်နဲ့ တူမယ်။ စည်းကမ်းတွေ၊ တာဝန်တွေ ဂရုမစိုက်ဘူး။ ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ် စိတ်ကြိုက် အသက်ရှင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားမယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူး။
ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပေမယ့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ လွတ်လပ်ခြင်း မခံစားရသူတွေ ရှိမယ်။ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပေမယ့် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်အသက်ရှင်နေသူလည်း ရှိမယ်။ ခရစ်ယာန်မဟုတ်သေးဘဲ တရားစကားတွေကို စဉ်းစားနေသူလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ဘုရားသခင်က သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ အဖေပါ။ သားပြန်လာမယ့် အချိန်ကို မြော်လင့်စောင့်ဆိုင်း၊ အကဲခတ်နေသူပါ။ ဘုရားသခင်ထံ ပြန်လာရင်၊ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ၃၁ ကြိမ်မြောက် ဖြစ်ဖြစ်၊ ပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်ပါ။ ပါတီပွဲကြီးပါ။ အပြစ်ရှိတဲ့သူတယောက် နောင်တရရင် ကောင်းကင်မှာ အရမ်းဝမ်းမြောက်ကြပါတယ်။
ထင်ရှားတဲ့အပြစ်ရှိရင် - ဘုရားသခင်ထံ လှည့်ပြန်ပါ။
ဖွက်ထားတဲ့အပြစ်ရှိရင်လည်း - ဘုရားသခင်ထံ လှည့်ပြန်ပါ။
သခင်ယေရှုထံလာဖို့ တခါမှ မဆုံးဖြတ်ရသေးရင် ဘုရားသခင်ကို အဖလို့ ခေါ်ဖို့ခက်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် “ဒီနေ့ပဲ ပြန်လာပြီ အဖ” လို့ ခေါ်လိုက်ပါ။
Posted by Papa at 2:28 AM
Labels: Sermon, တရား
"ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်တို့ကို ဆင်ခြင်လော့။ ကောက်စေတော်မူသော အရာတို့ကို အဘယ်သို့ ဖြောင့်စေနိုင်သနည်း။" - ဒေသနာ ၇း ၁၃
မြေပဲစေ့တွေက အစာကို ဘယ်လိုရသလဲ? သူက အခွံနဲ့ ဆက်မနေဘူး။ အခွံနဲ့ဆက်နေတဲ့ မြေပဲစေ့လို့ မရှိဘူး။ သူက အခွံနဲ့ အမြဲလွတ်နေတယ်။ အစာဘယ်လိုရမလဲ? အား ဘယ်လိုရသလဲ?
သူ့မှာ အကာ ၃ မျိုး ရှိပါတယ်။ မြေပဲစေ့မှာ အကာ ပါးပါးလေးတခု ရှိတယ်။ အခွံထဲမှာ နောက်ထပ်တလွှာ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ အခွံ ရှိတယ်။ မြေပဲစေ့က အစာ ဘယ်လိုရသလဲဆိုတာဟာ မသိနိုင်ပါဘူး။ အံသြစရာတခုပါ။ စပျစ်ပင်မှာ ဖြောင့်တဲ့အပင်လို့ မရှိပါ။ ဖြောင့်အောင်လည်း စိုက်လို့မရပါ။ သဘာဝကိုက ကောက်တဲ့အမျိုးပါ။
Beans ပဲမျိုးမှန်သမျှဟာ အဖြောင့်မနေနိုင်ဘူး။ တိုင်ထောင်ပေးရင် ဘယ်ဖက်ကို အနွယ်တက်လေ့ရှိတယ်။ စားသမျှ ပဲစေ့တွေဟာ ဘယ်ဖက်အနွယ်က ထွက်တယ်။ တိုင်မှာ ဘယ်ထက်ကနေ ညာကို တက်ပြီး ကြီးရတယ်။ ညာဖက်ကနေ ဘယ်ကိုပြန်တက်ဖို့ ထားကြည့်ပါ။ သုံးရက်အကြာမှာ ပဲပင် သေပါလိမ့်မယ်။ သူနေချင်သလို မနေရရင် သေပါတယ်။
အမျိုးသမီးတယောက် ပဲပင်တွေ တိုင်ထောင်ပြီး ဆယ်ဧကလောက် စိုက်ထားတယ်။ သုံးရက်မြောက်နေ့မှာ ပဲပင်တွေ အကုန်လုံး သေတယ်။ စိုက်ပျိုးကျောင်းဆင်း အတော်ဆံးပညာရှင် ၅ ယောက်ကို ခေါ်ပြီး၊ ပြသနာကို အဖြေရှာခိုင်းတယ်။ သူတို့က မြေဆီကို စစ်တယ်။ ပိုးတွေ တွေ့မလားလို့ မှန်ဘီလူးနဲ့ ရှာကြတယ်။ အဖြေမတွေ့ကြဘူး။ ပြသနာက အဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့ လူတွေက ညာသန်တွေ။ ပဲပင်တွေကို ညာကနေ ဘယ်ဖက်ကို ခွေထားတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရင် သေမှာပဲ။ သုံးရက်နေ့မှာ သေတယ်။
Dandelions ပေါင်းပင်တွေကို နှိမ်ထားလို့ မရဘူး။ မြက်ပင်တွေ ၂ လက်မရှိရင်၊ သူက ၃ လက်မပဲ။ မြက်ပင်တွေ ၅ လက်မရှိရင်၊ သူက ၆ လက်မရှိလာမယ်။ မြက်ပင် ၁၀ လက်မရှိရင်၊ သူက ၁၁ လက်မ ရှိလာမယ်။ သူက ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေရဲ့ အထက်မှာ အမြဲရှိနေတဲ့သူ။ ဘာကြောင့် အဲဒီလို ရှိနေသလဲ? မသိနိုင်ပါဘူး။ တခါက ကျောင်းသားတယောက်က သူနားမလည်တဲ့အရာတွေကို သူမယုံဘူးလို့ ပြောလာပါတယ်။ သူ့ကို မေးခွန်းနဲနဲ မေးကြည့်တယ်။ အနက်ရောင် နွားမတကောင်က အစိမ်းရောင် မြက်ကို စားပြီး၊ အဖြူရောင် နွားနို့ ရတယ်။ ကျိုလိုက်တော့ အဝါရောင် ထောပတ်ရ ဘာလို့ရသလဲ? သူမဖြေတတ်ဘူး။
လူက လက်တွေနွေးအောင် လက်ဖဝါးကို ပါးစပ်နဲ့ လေမှုတ်ပေမယ့် ကော်ဖီအေးအောင် ဘာကြောင့် လေနဲ့မှုတ်သလဲ? သူမဖြေနိုင်ဘူး။
လျှပ်စစ်နဲ့ တဖက်က မုန့်ဖုတ်လို့ရပြီး၊ တဖက်က ရေခဲဘာလို့ ထုတ်ရသလဲ? သူမဖြေနိုင်ဘူး။
လူ့ရဲ့အစာအိမ်ဟာ စားသမျှကို အစာချေနေပေမယ့် သူ့ကိုသူတော့ အစာချေမပစ်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ? မသိနိုင်ပါဘူး။
ငှက်ဖျောဖီးတိုင်းမှာ အောက်ဆုံးအတန်းဟာ ၂၄ လုံးပါတယ်။အပေါ်တတန်းတိုင်းမှာ တလုံးစီလျော့သွားတယ်။ အောက်ဆုံးအတန်းကတော့ အမြဲတမ်းပဲ ၂၄ လုံး ရှိတယ်။ ဘုရားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုး မဟုတ်ဘူး။ စနစ်ကျတယ်။
Salt and Sugar ဆားနဲ့ သကြား
ဆားပွင့်အားလုံးဟာ စတုရန်းပုံ လေးထောင့်ညီ အခဲလေးတွေ ဖြစ်တယ်။ တခြားအခဲတွေဟာ စတုရန်းပုံ ရှိမယ်မထင်ဘူး။ အနုကြည့်မှန် မိုက်ခရိုစကုပ်အောက်မှာ စတုရန်းပုံအခဲဆိုရင်၊ သေချာတယ်။ အဲဒါ ဆိုဒီယမ် ကလိုရိုက်ပဲ။ ဆိုဒီယမ်နဲ့ ကလိုရိုဒ် ပေါင်းစပ်ပြီး စတုရန်းပုံ အခဲလေးတွေ ဖြစ်နေတာပါ။ သကြားကတော့ စတုရန်းပုံ မရှိပါဘူး။ သကြားဟာ အရောင်၊ အနံ့၊ အရသာ မရှိတဲ့ အရာသုံးမျိုး ပေါင်းစပ်ပြီး၊ သကြားဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် စတုရန်းပုံ သကြားခဲလို့ မရှိဘူး။ အခဲတွေက တူညီတဲ့ပုံစံအဖြစ် မရှိကြဘူး။
Bearing of Young သားပေါက်ခြင်း
ခိုနဲ့ ငုံးကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ငှက်တွေဟာ သီတင်းပတ် အတိအကျမှာ ဥပေါက်လေ့ရှိတယ်။ ခိုကတော့ ၁၈ ရက်အကြာမှာ ဥကပေါက်ပါတယ်။ ငုံးကတော့ ၂၃ ရက်အကြာမှာ ပေါက်တယ်။ ကျန်တဲ့ငှက်ဥတိုင်းဟာ ၇ ရက်၊ ၁၄ ရက်၊ ၂၁ ရက် တရက်ရက်မှာ ပေါက်တယ်။ တပတ်အတွင်းပေါက်တဲ့ ဥ၊ မရှိလောက်ဘူးထင်ပေမယ့်၊ အာလူးပိုးရဲ့ဥက တပတ်၊ ၇ ရက်အကြာမှာ ပေါက်ပါတယ်။
အိမ်မွေးကြက်ငှက်တွေထဲမှာ ကြက်က ၃ ပတ်၊ ဘဲက ၄ ပတ်၊ mallard ဆိုတဲ့ ဂတ်ဘဲက ၅ ပတ်အကြာမှာ ဥပေါက်တယ်။ ကြက်တူရွေး၊ ငှက်ကုလားအုတ်နဲ့ alligator မိချောင်းခေါင်းတိုတွေက ၆ ပတ်အကြာမှာ ဥပေါက်ကြတယ်။ သားပေါက်အကြာဆုံးဥကတော့ မြွေဖြစ်တယ်။ သူက ၇ ပတ် ကြာတယ်။
တိရစ္ဆာန်တွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ သတင်းပတ်အလိုက် သားပေါက်ကြတယ်။ mouse ဆိုတဲ့ ကြွက်ကလေးတွေက ၂ ပတ်။ rat ဆိုတဲ့ ကြွက်က ၃ ပတ်။ ကြောင်က ၈ ပတ်။ ခွေးက ၉ ပတ်။ မြေခွေးက ၁၀ ပတ်။ ကြောင်မျိုးနွယ်ဝင် ခြင်္သေ့၊ ကျား၊ ကျားသစ် ..... စတာတွေက ၁၃ ပတ်။ မြင်းကတော့ ၃၉ ပတ်ကြာတယ်။ ချန်ပန်ဇီ၊ မျောက်ဝံ၊ ဂေါ်ရီလာ၊ Baboon စတဲ့ မျောက်ကြီးမျိုးတွေက ၃၅ ပတ်ကြာပြီး၊ မျောက်ကလေးတွေကတော့ ၂၂ ပတ် ကြာတယ်။ ဝက်ဝံက ၂၆ ပတ်။ သမင်က ၂၉ ပတ်။ သူတို့အားလုံးဟာ သတင်းပတ် အတိအကျ၊ ၇ ရက်ပေါင်း အတိအကျမှာ ပေါက်ကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? ဘုရားသခင်က God of order စနစ်ကျလို့ပါ။လူက ၄၀ ပတ်အကြာမှာ ဖွါးပါတယ်။ ဒါဝင်ဟာ တောင်အမေရိကရဲ့ တောင်ပိုင်းတောနက်ထဲကို သွားခဲ့တယ်။ အနိမ့်ကျဆုံးလူသားတွေကို တွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ အဲဒီမှာ ကလေးတွေဟာ သတင်းပတ် ၄၀ အကြာမှာ မွေးတာတွေ့ရတယ်။ အမေရိကန်ပြည်မှာ လိုပါပဲ။ လူတွေဟာ အမေရိကားမှာနေနေ၊ တောင်အမေရိက တောနက်ထဲမှာနေနေ၊ သတင်းပတ် ၄၀ အကြာမှာ မွေးဖွါးပါတယ်။
ပင်လယ်ရေလှိုင်းတွေဟာ တမိနစ်မှာ ၁၈ ကြိမ် ရိုက်ခတ်တယ်။ လှိုင်းအမြင့် ၃ လက်မဖြစ်ဖြစ်၊ ၃ ပေဖြစ်ဖြစ်၊ ပေ ၃၀ ဖြစ်ဖြစ် တမိနစ်ကို ၁၈ ကြိမ် ရိုက်ခတ်တယ်။ ရေငြိမ်သည်ဖြစ်စေ၊ မုန်တိုင်းထန်သည်ဖြစ်စေ ၁၈ ကြိမ် ရိုက်ခတ်တယ်။
သင်္ဘောတွေရဲ့ အလျားဟာ ပေ ၃၀၀ နဲ့ ၄၀၀ ကြား (သို့) ပေ ၆၀၀ နဲ့ ၇၀၀ ကြား (သို့) ပေ ၉၀၀ နဲ့ ၁၁၀၀ ကြားမှာ တည်ဆောက်ကြတယ်။ ဒါက လှိုင်းလုံးတခုနဲ့တခု ပေ ၃၀၀ ခြားတဲ့အတွက် ဖြစ်တယ်။ သင်္ဘောငယ်လျှင် ပေ ၃၀၀ ကွာတဲ့ လှိုင်းလုံး ၂ လုံးကြားမှာ ရောက်မယ်။ နောက်တပြန်အတွက်ဆိုရင် နောက်ထပ် ပေ ၃၀၀ လိုတယ်။ Queen Mary, Queen Elizabeth နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ရှိ သင်္ဘောအများစုဟာ ပေ ၁၀၀၀ ရှည်ပါတယ်။ အဲဒီသင်္ဘောတွေဟာ လှိုင်းလုံး ၄ လုံးကို ဖြတ်ရတယ်။ လှိုင်းလုံးတခုနဲ့တခု ပေ ၃၀၀ ကွာတော့ အဲဒီလောက်အရှည် တည်ဆာက်ဖို့ လိုတယ်။
Human Beings လူ
လူ့ကိုယ်ခန္ဓာကလည်း အံ့သြစရာပါ။ တချက်တည်းနဲ့ ဆီဖြည့်တဲ့စနစ်ပါနေတယ်။ တနေရာတည်းသော လည်ချောင်းပေါက်မှ အစာထည့်လိုက်တဲ့အခါ အရိုးအဆစ်ပေါင်း ၂၆၄ ခုကို ချောဆီထိုးပေးပါတယ်။ နေ့ထိုင်းချောဆီထိုးရတာပါ။ ဒီအချက်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကိုယ်ဖါသာကိုယ် ချောဆီထိုးရရင် တချို့အဆစ်တွေကို မေ့ကျန်ခဲ့မှာပဲ။ ဒါဆို အဆစ်တွေ တခုနဲ့တခု မဆက်စပ်တော့ဘဲ၊ အလုပ်လုပ်ဖို့ ခက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဖြည့်နေရရင် အချိန်ကြာလွန်းလို့ တခြားဘာအလုပ်မှ မလုပ်နိုင်မှာကို ဘုရားသခင်သိတဲ့အတွက် အလိုအလျောက် ချောဆီထိုးတဲ့စနစ်ကို ထည့်ထားပေးပါတယ်။ လူ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေက သူ့အလုပ်သူ ပုံမှန်လုပ်ပါတယ်။ ဒူး၊ မျက်စိ၊ လည်ပင်း ..... စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒီနေရာမှာ အသားစားတာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စားတာနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေက သူ့အလုပ်သူ လုပ်ကြတယ်။
ပါးစပ်ကို စိုစွတ်အောင် ဖန်းဆင်းထားတဲ့အကြောင်းကို ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖူးသလား? မဟုတ်ရင်၊ မြေပဲဆံအနှစ် ထောပတ်ကို စားကြည့်ပါ။ ၂ နာရီလောက် တခြားဘာမှ မစားနိုင်ဘဲနေမယ်။ လျှာမှာ ဇွန်းနဲ့ခြစ်ယူမှ သက်သာလိမ့်မယ်။
မျက်စိတ်ပိတ်မသွားအောင် မျက်တောင်လေးတွေကို စိုစွတ်နေစေတဲ့အတွက် ဝမ်းမသာဘူးလား? ချုံ့နိုင်၊ ချဲ့နိုင်တဲ့ အရေပြားကလည်း အံ့သြစရာပါ။ ထိမိခိုက်မိရင် အလိုက်သင့် အရေပြားကို ချဲ့လိုက်တဲ့အတွက် ပြုတ်ထွက်မကုန်တာ ဖြစ်တယ်။
အမျိုးသမီးတွေမှာ နှုတ်ခမ်းမွေးတွေ၊ မုတ်ဆိတ်မွေးတွေ မပေါက်တာ မကောင်းဘူးလား? ပေါက်နေရင် မနက်စာအတွက် မီးဖိုချောင်မဝင်နိုင်ဘဲ၊ ရေချိုးခန်းမှာ မုတ်ဆိတ်ရိတ်နေရမယ်။
အရိုးအဆစ်တွေကလည်း ထူးဆန်းတယ်။ လူ့ရဲ့ ခြေနှစ်ချောင်းထဲက အရိုးတွေဟာ သေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတကိုယ်လုံးနဲ့အတူ သူသယ်လာသမျှ ပစ္စည်းတွေကို ထောက်မထားနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ လူတကိုယ်လုံးကို ခြေတချောင်းတည်းအပေါ်မှာ ရပ်နေတာ ဖြစ်တယ်။
လူ့ရဲ့နားကလည်း ထူးဆန်းပါတယ်။ ပျော့ပျော့လေးနဲ့ တောင့်တောင့်လေးနေတယ်။ အသံလှိုင်းတွေက နားရွက်ကို ရိုက်ခတ်တယ်။ ပြီးမှ နားထဲကို သူ့သဘာဝအတိုင်း ဝင်လာတယ်။ နားမှာ အံ့သြစရာတခု ရှိတယ်။ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အသံတိုင်းကို လူက ကြားတာမဟုတ်ဘူး။
ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာန အများကြီးက မြင့်မားတဲ့ ကြိမ်နှုန်းတွေနဲ့ နေ့စဉ် အသံလွှင့်နေတယ်။ တစက္ကန့်မှာ ကြိမ်နှုန်း ၂ သိန်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်။ လွှင့်နေသမျှကို လူတွေ ကြားနေရရင် အကုန်ရူးသွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ရေဒီယိုပညာရှင်တွေက ကြိမ်နှုန်းကို ၅၀၀၀ မှ ၂၅၀၀၀ ကြားကို လျော့ချကြတယ်။ လေထုထဲမှာ ဖြစ်နေသမျှအသံတွေကို မကြားနိုင်အောင် လူ့နားကို ဘုရားဖန်ဆင်းထားတယ်။
Wilson opinion ဝေးလ်ဆင်အယူအဆအကြောင်း ပြောပါဦးမယ်။ နှလုံးရောဂါကြောင့် သွားရင်းလာရင်း၊ ထိုင်နေရင်း သေတဲ့လူတွေ ဘာကြောင့်များသလဲ? အကြောင်းရင်း ၃ ခု ရှိတယ်။
ပထမက ဒီနေ့ခေတ်မှာ လျှပ်စစ်လှိုင်းတွေ ထွက်နေတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ နေ့နေ့ညည အမြဲပါတ်သက်နေရတယ်။
ဒုတိယ- ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေ .... စတဲ့ လောင်စာဆီသုံးတဲ့ ယာဉ်တွေကထွက်တဲ့ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ဓါတ်ငွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ရှုရှိုက်နေကြရတယ်။
တတိယ - လူတွေက သိပ်မနားတော့ဘူး။ စားမယ်၊ သွားမယ်ပဲ ဖြစ်နေပြီ။ အိမ်မှာ အေးအေးဆေးဆေး မနားကြတော့ဘူး။ ဒီအချက် ၃ ချက်ကြောင့် နှလုံးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ပြသနာတွေ ဖြစ်ကြရတာပါ။
ပုရွက်ဆိတ်တွေက ထူးခြားတယ်။ "အချင်း လူပျင်း၊ ပုရွက်ဆိတ်ထံသို့ သွား၍၊ သူ့၏ her ways အပြုအမူတို့ကို ဆင်ခြင်သဖြင့် ပညာရှိစေလော့။" - သုတ္တံ ၆း ၆း။
ဘာလို့ her ways လို့ ပြောသလဲ? ပုရွက်ဆိတ်ထီးကို မြင်ဖူးကြမှာ မဟုတ်လို့ပါ။ အထီးက မြေတွင်းထဲမှာပဲနေပြီး၊ အမက အပြင်ထွက် စီးပွါးရှာတယ်။
ထူးဆန်းတာ တခုရှိတယ်။ ပရွက်ဆိတ်မှာ နား ၄ စုံ ရှိတယ်။ ခေါင်းမှာ တစုံ၊ ရှေ့ခြေမှာ တစုံ၊ ရင်ဘတ်မှာ တစုံ၊ ဗိုက်မှာ တစုံ ရှိတယ်။ တကောင်နဲ့တကောင် တွေ့ကြတဲ့အခါ ပါလာသမျှအကုန် ချထားလိုက်တယ်။ တခြားတကောင်ကလည်း သူတပါးယူလာတာကို လုံးဝ ကောက်မကိုင်ဘူး။ ဒါက တကယ်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ အချက်ပါပဲ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မှန်ဘီလူးနဲ့ သူတို့ကို စောင့်ကြည့်တဲ့အခါ ဒီအချက်ကို တွေ့ရတယ်။
သူက ရှေ့ခြေနဲ့ တခြားပုရွက်ဆိတ်ရဲ့ ခေါင်းကို စမ်းကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ သူအစာကို ဘယ်နေရာက ရလာတယ်ဆိုတာ ပြောပြတယ်။ အဲဒီမှာ အစာရကြတယ်။ လမ်းမှာတွေ့သမျှ ပုရွတ်ဆိတ်တွေကို ဒီနည်းအတိုင်း ပြောပြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အကုန်လုံး အစာရသွားကြတယ်။
သူတို့ထံမှ သင်ယူစရာက ရိုးသားမှုပဲ။ သူတပါးပစ္စည်း မယူနဲ့။ ဘုရားကျေးဇူးခံစားရတာကို ပြောပြပါ။ ကိုယ်တွေ့တဲ့ ပျားရည်၊ အသက်ရေ၊ အသက်မုန့်အကြောင်း ပြောပြပါ။ ခရစ်တော်အကြောင်း ပြောပြပါ။
ဒီလိုနည်းနဲ့ ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ကျောက်မီးသွေးတွင်းတူးသမားတယောက်က သခင်ယေရှုအကြောင်း ပြောပြတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော် မသိဘူး။ သူက အိုင်အိုဝါကနေ ကဲင်းစပ်ကို ရောက်လာတယ်။ သခင်ယေရှုအကြောင်း ပြောပြတယ်။
"လက်ဖြင့်ကိုင်ဆွဲ၍ နန်းတော် ပင် နေတတ်သော အိမ်မြောင် .... "The spider taketh hold with her hands," သုတ္တံ ၃၀း ၂၈။
ပင့်ကူအထီးကို မြင်ဖူးမှာ မဟုတ်ဘူး။ အမက ပင့်ကူအိမ်ကို ဆောက်တယ်။ အထီးက မဆောက်ဘူး။ အထီးက သိပ်သေးတယ်။ အများအားဖြင့် ပင်အပ်ခေါင်းလောက်ပဲ ရှိမယ်။ ပင့်ကူမက ခြေတွေနဲ့ ပင့်ကူမျှင်တွေ ယက်ပြီး၊ စေးကပ်စေတဲ့အရာကို ပင့်ကူမျှင်ပေါ်မှာ ချထားတယ်။ ပိုးကောင်းလေးတွေ ထောင်ခြောက်မိပြီး သူ့အစာဖြစ်ရတယ်။ ပင့်ကူမျှင်ဟာပိုးစာမျှင်ထက် အဆ ၂၀ ပို ခိုင်တယ်လို့ တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အများကြီးမရနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းက ပင့်ကူအထီးနဲ့ အမဟာ အတူ မနေနိုင်ကြဘူး။ အမက အထီးကို သဘောမကျတဲ့အခါ စားပစ်လိုက်တယ်။ သူတို့က အသားစားသတ္တဝါတွေပါ။
နောက်တမျိုးကတော့ Bell Spider ခေါင်းလောင်းပင့်ကူပါ။ သူ့မှာ အမွေးတွေ ရှိတယ်။ ချောင်းထဲကို သွားပြီး သစ်ကိုင်း၊ သစ်ရွက်တခုခုမှာ ခိုတယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းလောင်းပုံ ပင့်ကူအိမ် ဖွဲ့တယ်။ တလက်မလောက် ရှိမယ်။ ရေထဲကို ဆင်းလိုက်တက်လိုက် လုပ်မယ်။ တက်လာရင် လေတွေကို သူ့အမွေးနဲ့ ယူသွားမယ်။ ရေအောက်မှာ ကိုယ်က အမွေးတွေကို ညှစ်ပြီး လေထုတ်ယူမယ်။ နောက်ပြန်တက်ပြီး အမွေးနဲ့ လေယူမယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ လေအပြည့်ရသည်အထိ ညှစ်ယူမယ်။ ပြီးမှ ရေမှာမျောလာမယ့် အစာကို ထိုင်စောင့်တယ်။ တွေ့ရင် ဖမ်းယူပြီး ရေပေါ်တက်ကာ လေရှိရာအရပ်မှာ စားသောက်တယ်။ ဒီပညာ သူဘယ်က ရသလဲ?
ကျောင်းသားတယောက်က လာဇရုဟာ သေပြီး ၄ ရက်လောက်မှာ အလောင်းရစ်ပတ်တဲ့ အဝတ်တွေနဲ့ ပြန်ရှင်လာတာကို မယုံဘူးတဲ့။ အလောင်းထုပ်ပိုးထားတဲ့အဝတ်တွေနဲ့ ဘယ်လို လမ်းလျှောက်မလဲတဲ့။
လိပ်ပြာဟာ ပိုးတုံးလုံးဘဝကနေ ကိုက်ဖြတ်ထွက်ဖို့ သွားမရှိဘူး။ ပိုးတုံးလုံးရဲ့ အမျှင်တွေဟာ လေ၊ ရေ၊ အလင်း၊ အပူ လုံးဝမဝင်နိုင်အောင် ကာကွယ်ထားတယ်။ အဲဒီကနေ ဘယ်လိုပွင့်ထွက်လာသလဲ မသိနိုင်ဘူး။ တွားသွားတဲ့ ပိုးကောင်ဘဝရောက်တဲ့အခါ ခြေ ၁၄ ချောင်း ရှိတယ်။ လိပ်ပြာဘဝရောက်တဲ့အခါ ခြေ ၆ ချောင်းပဲ ရှိတော့တယ်။ ၈ ချောင်း ဘယ်ရောက်သွားသလဲ? မသိနိုင်ဘူး။ အမွေးအမျှင်တွေ ပျောက်ပြီး၊ တောင်ပံတွေနဲ့ ဖြစ်လာတယ်။
Watermelon, Trees, Wheat ဖရဲသီး၊ သစ်ပင်၊ ဂျုံ
ဖရဲသီးတိုင်းမှာ အစင်းကြောင်း stripes ၁၀ ကြောင်းစီ ပါပါတယ်။ သစ်ပင်တွေမှာ အရွက်တွေ ဘယ်လိုကြီးလာကြသလဲ?ပန်းသီးပင်မှာ ၅ ရွက်မြေက် အရွက်ဟာ ပထမအရွက်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်ကို ထွက်တယ်။ peach မက်မွန်သီးပင်မှာ ၈ ရွက်မြောက်ဟာ ပထမအရွက်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် ထွက်တယ်။ Plum ထန်းပင်မှာ ၄ လက်မြောက်ဟာ ပထမအလက်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် ထွက်တယ်။ Ash tree ဆိုတဲ့ သံလွင်ပင်တမျိုးဟာ ၂၂ ရွက်မြေက်အရွက်က ပထမအရွက်ကို ဆန့်ကျင် ထွက်တယ်။ သခင်ယေရှုက ယုံကြည်သူဟာ အဆ ၃၀၊ ၆၀၊ ၁၀၀ ကြီးပွါးရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဂျုံပင်တွေဟာ ဒီအတိုင်း ကြီးကြရတယ်။ အသေးစား ဂျုံပင်တပင်မှာ အစေ့ ၂၈၊ ၃၀ သို့မဟုတ် ၃၂ ရှိပါလိမ့်မယ်။ အမြဲတမ်း စုံဂဏန်းဖြစ်မယ်။ အပင်ကောင်းရင် ၅၈၊ ၆၀ သို့မဟုတ် ၆၂ ရှိမယ်။ အပင်သန်လို့ ခေါင်းညွတ်ကျနေရင် ၉၈၊ ၁၀၀ သို့မဟုတ် ၁၀၂ ရှိမယ်။ သခင်ယေရှုက သူ့ပြောတဲ့စကားကို သူသိတယ်။
အီဂျစ်ပြည်မှာ ယင်တွေကို မောင်းထုတ်တော့ တကောင်မှ မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုတယ်။ (ထွက် ၈း ၃၁)
ယင်ကောင်ရဲ့ မျက်စိမှာ ထောင်ချီတဲ့ မှန်ကူကွက်တွေ ပါတယ်။ နောက်က လိုက်ရိုက်တဲ့အခါ မျက်လုံးအကွက်တထောင်ပါပေမယ့် မခုန်ပျံနိုင်ဘူး။ ပျံပြီး မျက်နှာကြက်မှာတော့ ဇောက်ထိုးနားတယ်။ သူ့ကို ဘာက မျက်နှာကြက်မှာ ကပ်နေစေသလဲ? ဆောင်တွင်းမှာ ယင်ကောင်ဟာ ပြတင်းပေါက်ဘောင်ပေါ်မှာ အေးခဲပြီး သေနေတာ တွေ့ရမယ်။ သူ့ကိုယ်က ကော်တမျိုးက အေးခဲသွားတာ ဖြစ်တယ်။ ယင်ရဲ့ခြေထောက်မှာ အမွေးပွ အချောင်း ၁၅၀ ရှိတယ်။ အဲဒီအမွေးပွတွေက ခြေတဖက် အချောင်း ၁၅၀ နဲ့၊ ပေါင်း အမွေး ၉၀၀ လောက်ဟာ သူ့ခြေချတဲ့နေရာတိုင်းမှ ကော်တမျိုးနဲ့ စေးကပ်နေတာ ဖြစ်တယ်။
ခြေလေးချောင်းပေါ်မှာ တပြိုင်နက်တည်း ထရပ်နိုင်တာ ဆင်ပဲ ရှိတယ်။ နွားက နောက်ခြေကနေ စရပ်တယ်။ မြင်းက ရှေ့ခြေနဲ့ စရပ်တယ်။
ဆင်ကတော့ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးလွန်းလို့ ခြေ ၄ ချောင်းလုံးနဲ့ ရပ်ရတယ်။ ဆင်ရဲ့ နောက်ခြေက ရှေ့ကို ကွေးညွှတ်လိုက်တယ်။ လိပ်ကလွဲလို့ ခြေလေးချောင်းသတ္တဝါတွေဖြစ်တဲ့ မြင်း၊ ခွေး၊ ကြောင်၊ နွား စတာတွေဟာ နောက်ခြေကို နောက်ဖက် ကွေးနိုင်တယ်။ ဆင်ရဲ့ နောက်ခြေကတော့ ရှေ့ကို ကွေးနိုင်တယ်။ ဒါမှ သူ့ကိုယ်ကို ထရပ်နိုင်တယ်။ သူ့နှာမောင်းက ကြွက်သားအကြောပေါင်း ၂၄,၀၀၀ ရှိတယ်။ Fulcrum ဆိုတဲ့ ကုတ်တွေမပါဘဲ ဘာလို့ ဒီလောက်သန်မာသလဲဆိုတာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ နားမလည်ကြဘူး။ နှာမောင်းကြွက်သားတချို့က မေးရိုးနဲ့ ဆက်နေတယ်။ ဒါကလည်း အတော်နဲပါတယ်။ ဆင်တကောင်ဟာ ပေါင် ၆၀၀ လောက်ရှိတဲ့ ကျားတကောင်ကို သူ့နှာမောင်းနဲ့ လွှဲချီပစ်ပေါက်နိုင်တယ်။ (ဆင်တကောင်မွေးဖွါးဖို့ ၈၇ ပတ်ကြာပါတယ်။)
ပျားလေးတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ သူ့က နံပါတ် ၃ တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ အစာအိမ် ၃ ခု ရှိတယ်။ တခုက အစာအတွက်၊ တခုက ပန်းဝတ်ရည်အတွက်၊ နောက်တခုက ပျားအုံရောက်တဲ့အခါ ပျားရည်သွန်ချဖို့ ဖြစ်တယ်။ ပျားတွေရဲ့ ဦးခေါင်းမှာ မျက်လုံး ၃ လုံး ပါတယ်။ အတောင်ပံ ၃ စုံ ရှိတယ်။ အစွယ် ၃ ချောင်း ပါတယ်။ ၉၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၄ စတဲ့ ရက်တွေမှာ ပျားတွေ ပေါက်တယ်။ အားလုံး ၃ နံပါတ်တွေ ဖြစ်တယ်။ အကောင်ပေါက်ပြီး ၃ ရက်အကြာထိ ပျားအုံထဲမှာနေတယ်။ နောက် ၃ ရက်က ပျားသလက်မှာ နေတယ်။ နောက်တော့ ပျားရည်စုဆောင်းတဲ့အလုပ် လုပ်ကြတယ်။
Blue Jay ဆိုတဲ့ ငှက်ကလေးတွေဟာ အာဖရိကတောနက်ထဲမှာ မျောက်တွေ မမှီနိုင်တဲ့ သစ်ကိုင်းအဖျားမှာ အသိုက်ဆောက်ကြတယ်။ အဲဒီဥာဏ် သူတို့ ဘယ်ကရသလဲ?
ဇီးကွက်တွေရဲ့ အတောင်ပံ အမွေးဟာ သိပ်နူးညံ့တယ်။ ညအချိန် အစာရှာတဲ့အခါ အတောင်ပံ အသံပြင်းပြင်း မထွက်စေဖို့ ဖြစ်တယ်။
ကြက်ကလေးတွေ ဥပေါက်လာတဲ့အခါ အချွန်ဖက်က မပေါက်ဘူး။ အချွန်ဖက်က သိပ်မာတယ်။ ဒါကြောင့် ကြက်မက ဥပေါက်တဲ့အခါ အချွန်ဖက်က အရင်ဥချတယ်။ အချွန်ဖက်ဟာ အထိုင်ဖက်ထက် ၂ ဆ မာတယ်။ အထိုင်ဖက်မှာ လေခိုနေတဲ့အခန်းလေး ရှိတယ်။ ရက် ၂၀ အကြာမှာ ဥထဲက ကြက်ကလေးက လေနဲနဲ စရှုတယ်။ ၂၁ ရက်အကြာမှာ အပေါက်ဖေါက်ပြီး၊ အကောင်ပေါက်လာတာ ဖြစ်တယ်။ ကြက်ဥထဲက ကြက်ကလေးရဲ့ အနေအထားဟာ ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲဘူး။ နှာခေါင်းလေးက လေခိုတဲ့အခန်းလေးဖက်မှာ အမြဲရှိတယ်။ ကြက်ဥရဲ့ အဖြူရောင်အကာတွေက အနှစ်တွေကို ပြောင်းပြန်မဖြစ်အောင် ဥနံရံမှာ ထိန်းချုပ်ပေးထားတယ်။
ဘုရားလက်ရာတွေဟာ စုံလင်၊ လှပ၊ အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်တယ်။ ဘုရားသခင်ကို အခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အသက်တာနဲ့ စိတ်နှလုံးကို လှပလာစေနိုင်တယ်။ ဘုရားသခင်ကို အားကိုးပါ။
Posted by Papa at 3:10 PM
Labels: Nature, Walter Wilson
The Foolish Boy - Lahu Story
ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ ကောင်းတာတွေ လုပ်မှရမယ်လို့ လူအများထင်တတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ကို ဘုရားသားတော်က လာပြီး အသေခံပေးခဲ့ပါပြီ။ ကိုယ်စားအသေခံပြီး အပြစ်ကြွေးကို ဆပ်ပေးခဲ့ပါပြီ။ လူက တခုခု လုပ်မှရမယ်၊ Do လို့ ထင်တယ်။ ဘုရားက ငါ လုပ်ပေးပြီးပြီ၊ Done လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကို နားမလည်ဘဲ မနေသင့်ပါဘူး။ လားဟူပုံပြင်လေးက ရယ်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မအ, ဖို့ သတိပေးနေပါတယ်။
The Foolish Boy: A Folktale from the Lahu People of Southeast Asia and China
This folktale warns about the perils of being foolish.It hasastartling and rather final ending.
Once, there wasawoman withavery foolish son who just stayed home all day.
One day, the boy smelledaneighbor's curry. Its smelled so good that he said, "Mother, I want to eatadelicious curry."
"How can I makeacurry at all if you do not bring back any food from the jungle? If you want curry, go look for some food to put in it."
So the boy madeafish trap. But he did not have the patience to wait along. Giving up, sure that the trap was empty, he threw it up into the trees. But there had beenasmall fish caught in the trap, and an egret landed on the trap and hadanice snack. The boy caught the egret and said to it, "Fly to my home and tell my mother that I said to kill you and makeacurry out of you." Then, he let the egret go and watched it fly away.
He went home. "Mother, did you get the egret? I told it to fly home so could makeacurry out of it."
"Son, if you want food, you first to kill it, then bring it back."
The next day, the foolish boy foundaclump of edible mushrooms. He remembered what his mother said. He beat the mushrooms toapulp to make sure they were dead, and then he brought the mess home.
"Son," his mother said, "this type of food needs to be pick one atatime, then carried home in your shoulder bag."
Off the son went. He foundahive of bees. Even though they stung him very badly, he managed to put them one by one into his shoulder bag and carry them home.
"Son," his mother said after she, too, had been stung and had chased the bees away with smoke, "for this kind of thing, you must first burn out the hive, then bring it home."
The next day, the foolish boy foundabarking deer, which isasmall deer that makes doglike noise. "I must burn it," the boy said. He set fire to the deer. It barked, leaped intoariver, and swam away.
When the boy told his mother what had happened, she sighed.
"Son, you must first strike it and kill it, then bring it home."
So the boy went off into the jungle. He foundaBuddhist monk there, struck him over the head, and dragged him home.
His mother, setting about reviving the stunned monk, said, "Son, this isaholy man. You do not strike him. You bow to him."
So the boy went off the jungle again. He foundatiger. Remembering what his mother had said, he bowed to it. The tiger ate him.
And that is why there isaLahu proverb; Stupid never survives.
(From "World Folklore for Storytellers")
လူအ, လေးတယောက်အကြောင်း - အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ တရုတ်ပြည်မှာနေထိုင်သော လားဟူလူမျိုးများရဲ့ ပုံပြင်။
ဒီပုံပြင်လေးက မ,အဖို့ သတိပေးထားတာပါ။ ဇာတ်သိမ်းက တမျိုးလေးပါ။
တခါတုန်းက အမျိုးသမီးတယောက်မှာ တနေကုန် အိမ်မှာပဲ ထိုင်နေတဲ့ သားတယောက် ရှိသတဲ့။ တနေ့တော့ ကောင်လေးက ဘေးအိမ်က ဟင်းနံ့ကို ရသတဲ့။ အနံ့လေးက သိပ်မွှေးတော့ - “အမေ၊ ဟင်းကောင်းစားချင်လိုက်တာဗျာ” လို့ ပြောသတဲ့။
“ငါက ဘယ်လိုလုပ် ဟင်းကောင်းချက်မလဲ။ မင်းက တောထဲသွားပြီး ဟင်းချက်စရာမှ မရှာတာ။ ဟင်းကောင်းစားချင်ရင် တောထဲသွားပြီး ဟင်းချက်စရာ ရှာခဲ့။” လို့ ပြောသတဲ့။
ဒါနဲ့ ကောင်လေးဟာ ငါးထောင်ဖို့ ယက်သဲ့တခုကို ရက်သတဲ့။ ဒါပေမယ့် သူက သိပ်မစောင့်နိုင်ဘူး။ ငါးမရဘူးဆိုပြီး လက်လျှော့လိုက်တယ်။ ယက်သဲ့ကိုတော့ ချုံပုတ်ပေါ် လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ယက်သဲ့ထဲမှာ ငါးသေးသေးတကောင် ပါလာတယ်။ ဗျိုင်းတကောင်က ယက်သဲ့ပေါ် ဆင်းလာပြီး အဆာပြေ စားလိုက်ရသတဲ့။ ကောင်လေးက ဗျိုင်းကို ဖမ်းလိုက်တယ်၊ “အိမ်ကို ပျံပြီး၊ ငါ့အမေကို ပြော။ နင့်ကို သတ်ပြီး ဟင်းကောင်းတခွက် ချက်လို့ ပြော။” ဆိုပြီး၊ ဗျိုင်းကို လွှတ်လိုက်ပြီး၊ ဗျိုင်းပျံပြေးတာကို ငေးကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။
အိမ်ရောက်တော့ “အမေ၊ ဗျိုင်းတကောင် မလာဘူးလား? ဟင်းချက်စားဖို့ အိမ်ပြန်သွားလို့ ပြောလိုက်တာ။”
“သားရယ်။ ဟင်းစားချင်ရင် အရင်သတ်ရတယ်။ ပြီးမှ အိမ်ကိုယူလာခဲ့။”
နောက်တနေ့ လူအ,လေးဟာ စားလို့ရတဲ့ မှိုတကျင်းကို တွေ့သတဲ့။ အမေ့စကား သူ သတိရသွားတယ်။ မှိုတွေကို သေအောင် ရိုက်သတ်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ မှိုအကြေတွေကို အိမ်ကို ယူလာတော့တယ်။ “သား၊ ဒါမျိုးက တပွင့်ချင်း ကောက်ယူရုံပဲ။ ကျောပိုးအိတ်ထဲ ထည့်ယူလာခဲ့။” လို့ အမေက ပြန်ပြောတယ်။
ဒါနဲ့ သားက သွားပြန်တယ်။ ပျားအုံကြီး တအုံကို တွေ့တယ်။ ပျားတွေ အကြီးအကျယ် တုပ်ပေမယ့် တစုချင်း ကောက်ပြီး ကျောပိုးအိတ်ထဲ ထည့်ပြန်လာခဲ့တယ်။ အမေလည်း ပျားတုတ်ခံရလို့ ပျားတွေကို မီးခိုးနဲ့ မောင်းပြီးမှ “သား၊ ဒါမျိုး အသံမြည်ရင် မီးအရင် ရှို့ရတယ်။ ပြီးမှ ယူခဲ့” လို့ မှာတယ်။
နောက်တနေ့မှာ လူအ,လေးက အသံမြည်နေ၊ တောက်နေတဲ့ သမင်လေးတကောင်ကို တွေ့တယ်။ သူရဲ့တောက်သံက ခွေးဟောင်သံလိုပဲ။ ကောင်လေးက “မီးရှို့မှပဲ” လို့ ဆိုပြီး၊ သမင်ကို မီးရှို့ဖို့ လုပ်တယ်။ သမင်လေးက အော်ပြီး၊ မြစ်ထဲ ခုန်ချ၊ ရေကူးပြေးတော့တယ်။
ကောင်လေးက အမေကို အဖြစ်အပျက် ပြောပြတဲ့အခါ၊ အမေက သက်ပြင်းချတယ်။ “သား၊ ဒါမျိုးဆို၊ ရိုက်သတ်ပြီးမှ အိမ်ကို ယူခဲ့။”
ဒါနဲ့ တောထဲသွားပြန်တော့ သစ်ခေါက်ဆိုးတဲ့ ဝါဖန့်ဖန့် သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ ရသေ့တပါးကို တွေ့တယ်။ ခေါင်းကို ရိုက်ပြီး အိမ်ကို ဆွဲခေါ်လာတယ်။ အမေက သတိမေ့နေတဲ့ ရသေ့ကို ပြုစုပြီး - “သား၊ ဒီလို သူတော်စဉ်ဆိုရင် မရိုက်ရဘူး။ ဦးချရတယ်ကွဲ့။” လို့ မှာတယ်။
ဒါနဲ့ ကောင်လေးက တောထဲ သွားပြန်တယ်။ ကျားတကောင်ကို တွေ့တယ်။ အမေပြောတဲ့စကား အမှတ်ရပြီး၊ ကျားရှေ့မှာ ဦးချသတဲ့။ ကျားစာမိပါလေရော။
လားဟူပုံပြင်ပါ။ အ,လွန်းရင် သေတတ်ပါတယ်။
Posted by Papa at 9:53 AM
Labels: Story, ပုံပြင်
Biblical Principles for MUSIC AND WORSHIP By Paul Chappell (Burmese)
အသင်းတော်ဟာ ekklesia –acalled out assembly ခေါ်ထုတ်ထားတဲ့ အစုအဝေးဖြစ်တာကြောင့် ဓမ္မတေး church music ဟာ ဝိညာဉ်သဘောရှိရမယ်၊ သန့်ရှင်းရပါမယ်။
အကြိုက်က မတူတတ်ပါဘူး။ တချို့က ဂီတသမားရဲ့အကြိုက် ရှိသလို၊ တချို့က နားထောင်သူအကြိုက်၊ တချို့ကတော့ ဆူညံအော်ဟစ်ရုံ joyful noisemaker သက်သက်ပါ။ အကြိုက်ကလည်း ကျမ်းစာနဲ့ ညီဖို့တော့ လိုပါတယ်။ လုပ်ဆောင်သမျှဟာ ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ ဖြစ်ရပါမယ်။ (၁ ကော ၁၀း ၃၁)
အများအားဖြင့် နှစ်ခြင်းတွေက အလုပ်လုပ်ရင် ကျမ်းစာနဲ့ ညီဖို့ သတိထားတတ်ပေမယ့် ဓမ္မသီချင်း အပါအဝင် တချို့ အကြောင်းအရာတွေမှာ ခံယူပုံလေးတွေ ကွာတတ်တယ်။ အခု Principles တွေဟာ အတိအကျကြီး လိုက်နာဖို့ မဟုတ်ဘဲ သင်ယူမိတာကို ပြန်လည် ဝေမျှခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ ကျမ်းစာနဲ့ ညီသလို၊ ဘုန်းတော် ထင်ရှားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
1. ဝတ်ပြုခြင်းနဲ့ ဧဝံဂေလိမှာ တရားဒေသနာ Preaching ကသာ အဓိက ဖြစ်တယ်။
ကယ်တင်ခြင်းကို သီချင်းဖွဲ့ဆိုနိုင်ပေမယ့် ဓမ္မဟောင်းရော၊ ဓမ္မသစ်မှာပါ နှုတ်ကပတ်တော် ဟောပြောခြင်းက အဓိကကျပါတယ်။ - ၁ ကော ၁း ၂၁။
2. ဓမ္မသီချင်းဟာ ဘုရားနဲ့ သန့်ရှင်းခြင်းကို reflect ရောင်ပြန်ဟပ်ရမယ်။
ခေရုဗိမ် ကောင်းကင်တမန်တွေက ဘုရားသခင် သန့်ရှင်းတယ်လို့ ကောင်းကင်မှာ ကြွေးကြော်ကြတယ်။ ဟေရှာယ (၆း ၃) ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာလည်း သန့်ရှင်းသူတွေက ရွေးနှုတ်ခြင်းနဲ့ သန့်ရှင်းခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်း သီဆိုကြတယ်။ (ဗျာဒိတ် ၅း ၈- ၁၄) သန့်ရှင်းခြင်းကို လျစ်လျူရှုပြီး အကြိုက်မတူတာပါလို့ မပြောသင့်ပါ။ အကြိုက်ဆိုတာ မှားနေနိုင်ပါတယ်။ လူတယောက်က အကြမ်းဖက်တာကို ကြိုက်နေနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အကြမ်းဖက်တာဟာ ကျမ်းစာအရ လွဲမှားတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေ ဆိုနေတာနဲ့ပဲ ကြိုက်လိုက်တာဟာ မစဉ်းစားရာ ရောက်ပါတယ်။ ၁ ပေ ၁း ၁၄- ၁၆။
3. တရားစကားကို အလွန်အကျွံ တင်ဆက်တာ Over Contextualizing ဟာ အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။
တရားစကား ကြားစေချင်၊ နားလည်စေချင်တာ သဘာဝပါ။ တင်ဆက်ပုံ Contextualization ကတော့ တရားစကားကို ထုတ်ပိုးတဲ့ Package ပါ။ ဒါပေမယ့် အထုတ်အပိုးကို သိပ်ဦးစားပေးတဲ့အခါ အထဲက တရားက အားလျော့ တတ်တယ်။ တခါတရံဆိုရင် အထုပ်က သိပ်ကောင်းလွန်းနေပြီး၊ အထဲမှာ ဘာမှမပါတာမျိုး ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အကာနဲ့ အနှစ်ကို ချိန်ညှိတတ်ဖို့ လိုတယ်။
အသင်းတော်တွေမှာ ခေတ်ပေါ်ဓမ္မတေးတွေကို ဆိုတတ်တယ်။ အဓိကကတော့ ခရစ်တော်ပါဖို့ပါပဲ။ နောက်ဆုံးပေါ် beats တွေကို တီးခတ်ပြီး လူ့အကြိုက်ပဲ လိုက်နေပြီး၊ ဘုရားအကြိုက် မပါဘဲ ဖြစ်နေရင် မကောင်းပါဘူး။ “မတည်ကြည်သောသူတို့နှင့် ရောနှော မပေါင်းဖေါ်နှင့်။” (သုတ္တံ ၂၄း ၂၁) “meddle not with them that are given to change”. – Proverbs 24; 21. ဆိုတဲ့ ကျမ်းချက်က ဆင်ခြင်စရာ ကောင်းပါတယ်။ အပြောင်းအလဲ Change ဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။ ဒါပေမယ့် ပြောင်းလဲရတာက အဆင်အပြင်ကြောင့်ဆိုပြီး တရားက မှေးမှိန်နေတာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဆာလံ ၂၉း ၂၊ ၁ ကော ၉း ၁၉- ၂၃။
4. ဓမ္မသီချင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ဝတ်ပြုဖို့၊ ချီးမွမ်းဖို့၊ ဝမ်းမြောက်ဖို့၊ ဆက်ကပ်ဖို့၊ တည်ဆောက်ဖို့၊ ဧဝံဂေလိနဲ့ ယုံကြည်ခြင်း ခိုင်မြဲဖို့အတွက်သာ ဖြစ်တယ်။
ဝတ်ပြုရာမှာ သီချင်းဟာ ပါစမြဲပါ။ ဒါဝိဒ်က သီချင်းသည်တွေ ခန့်ထားတယ်။ (၅ရာ ၉း ၃၃၊ ၁၅း ၁၆)။ သီချင်းသည် ၄,၀၀၀ ထဲမှာ အာသပ်ကို သီချင်းဆရာအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ (၅ရာ ၆း ၃၁၊ ၃၉)
ဂီတဟာ ဖျော်ဖြေရေး entertainment သက်သက်ပါ။ ဓမ္မသီချင်းက ဖျော်ဖြေရေးအတွက် မဟုတ်ဘူး။ ကျမ်းစာကပြောတဲ့ ဓမ္မသီချင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေက ……
Worship ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ - ၆ ရာ ၂၉း ၂၈။
Thanksgiving ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ - ဆာလံ ၁၄၇း ၇။
Rejoicing ဝမ်းမြောက် ရွှင်လန်းဖို့ - ဆာလံ ၉၈း ၄- ၅။
Consecration ဆက်ကပ်ဖို့ - ဆာလံ ၁၁၁း ၁။
Edification တည်ဆောက်ဖို့ - ကောလောသဲ ၃း ၁၆။
Evangelism ဧဝံဂေလိအတွက် - ဆာလံ ၄၀း ၃။
Preservation of the faith ယုံကြည်ခြင်း ခိုင်ခန့်ဖို့ - ဆာလံ ၁၄၅း ၄- ၅။
5. ကျမ်းစာအရ Psalms ဆာလံသီချင်း၊ Hymns ဓမ္မသီချင်းနဲ့ spiritual songs ( ဓမ္မတေး ) တွေကို ဦးစားပေး သင့်တယ်။
Bible Truth Music ကို တည်ထောင်သူ Dr. Byron Foxx က “We should sing to God, for God, and about God.” - ဘုရားထံ၊ ဘုရားအတွက်၊ ဘုရားအကြောင်း သီချင်းဆိုရမယ်လို့ ပြောဖူးပါတယ်။ Doctrine ခံယူချက်ရော၊ melody သံစဉ်ပါ ရည်ရှည်ခံတဲ့ သီချင်းတွေ သုံးကြရပါမယ်။ - ဧဖက် ၅း ၁၉။
6. Hymn ဓမ္မသီချင်းတွေဟာ ဘုရားကို ကျမ်းစာနဲ့အညီ Celebrate ချီးမြှောက်နေတာ ဖြစ်တယ်။
ဧဖက် ၅း ၁၉ မှာ ပြောတဲ့ “Psalms” ဆာလံဆိုတာက ရှင်းပါတယ်။ အဲဒီခေတ် ပထမရာစုရဲ့ Hymns နဲ့ Spiritual songs ဆိုတာက သတ်မှတ်ရ ခက်တယ်။ Hymns ဓမ္မသီချင်းက ဘုရားဂုဏ်တော် attributes နဲ့ အမှုတော် works ကို အဓိက ချီးမွမ်းတယ်။ Hymns က အသစ်ရယ်၊ အဟောင်းရယ် မဆိုလိုပါ။ ဥပမာ “Consider Christ” ဟာ Hymn ဖြစ်ပြီး၊ “MakeaDifference” ဟာ Spiritual song ဖြစ်ပါတယ်။
Reformation ခေတ်က hymns အများစုဟာ ကျမ်းစကားတွေကို ရေးတာ ဖြစ်တယ်။ Isaac Watts က ဓမ္မသစ် doctrine ကို အခြေခံတယ်။ Wesley ညီအကိုက ကျမ်းစကားကို အခြေခံတဲ့ hymns ၇,၀၀၀ ကျော် ရေးတယ်။
Traditional Hymns နဲ့ Gospel songs တွေကို သုံရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း နှစ်ချက်ရှိတယ်။ တစ်က Doctrine ကောင်းတွေကို သင်ပေးတယ်။ နှစ်က ကျွန်တော်တို့နဲ့ သားစဉ်မြေးဆက် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသား ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဆာလံ ၁၀၄း ၃၃- ၃၄။
7. ဓမ္မသီချင်းဟာ melodies သံစဉ်နဲ့ စည်းချက် rhythms မှာ ဘုရားရဲ့ စည်းစနစ်ကျမှု orderliness ကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေရမယ်။
အသွေးအသားကို ဆူစေတဲ့ ယိမ်းနွဲ့စေတဲ့ သီချင်းမျိုးကို ရှောင်ရမယ်။ သံစဉ်က ဘုရားထံ ချဉ်းကပ်စေပြီး ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ လျှောက်လှမ်းစေရမယ်။ rhythm နဲ့ harmonies ပံ့ပိုးထားတဲ့ dominant (သံမှန်) သံစဉ် ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒီအကြောင်းက သိပ်ကျယ်ပြန့်လွန်းတော့ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ပိုင်းခြားဖို့ လိုတယ်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ဦးဆောင်စေရမယ်။ ၁ ကော ၁၄း ၄၀၊ ဧဖက် ၅း ၁၉။
8. CCM ခေတ်ပေါ်ဓမ္မတေးဟာ ကျမ်းစာ သွန်သင်ချက်ဖြစ်တဲ့ သီးခြားရပ်တည်ခြင်းကို ငြင်းပယ်နေတယ်။
အသင်းတော်ကို ခေါ်ထုတ်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လောကနဲ့ bridge ပေါင်းကူးဖို့ မဟုတ်ဘူး။ Stand out ရပ်ပြဖို့ ဖြစ်တယ်။ blend in ရောနှောဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ၁ ကော ၆း ၁၇။
9. ဓမ္မတေးဟာ ဘုရားဘုန်းတော်အတွက်သာ ဖြစ်တယ်။ လောကီဆန်ရင် လူ နာမည်ကြီးဖို့ ဖြစ်နေမယ်။
Rock and Roll နဲ့ Jazz ဟာ ဓမ္မတေးမှာ လက်မခံနိုင်စရာ ဖြစ်တယ်။ သံစဉ်နဲ့ rhythm ဟာ စာသားနဲ့အတူ သတင်းစကားကို သယ်ဆောင်တယ်။ တချို့သီချင်းက ဘုရားကို ကိုးကွယ်တာ မှန်ပေမယ့် တချို့သီချင်းတွေက အသွေးအသားကို ဦးစားပေးနေတယ်။ အာရုန် ဦးဆောင်ပြီးး နွားသူငယ်ကို ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာ သီချင်းဆို၊ ကခုန်ကြသလို ဖြစ်နေတယ်။ ထွက် ၃၂း ၁၈- ၁၉။
ကျမ်းစာနဲ့ညီရင် သီချင်းအသစ်လည်း ကောင်းတတ်ပါတယ်။ ကျမ်းစာကလည်း အသစ်သော သီချင်းကို ဆိုကြလော့လို့ မကြာခဏ အားပေးတတ်တယ်။ အသစ်သော သီချင်းဆိုတာ ပုံစံသစ်၊ အဖွဲ့အနွဲ့သစ် ဖြစ်နိုင်တယ်။ သီချင်းအသစ်ဆိုရင် စာသားကို လူတွေ ပုံပြီး အာရုံစိုက်တတ်ကြတယ်။
မရင်းနှီးတဲ့ သီချင်းထက် ရင်းနှီးပြီးသား သီချင်းကို သုံးတာ ပိုကောင်းတတ်တာလည်း သတိပြုရမယ်။ အသစ်ကို ရုတ်တရက် မကြိုက်တတ်တာ သဘာဝပါ။ စာသားက ကျမ်းစာနဲ့ ညီပေမယ့်လည်း ရုတ်တရက် မကြိုက်တတ်ပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း နားလည်ပေးတတ်ရပါမယ်။ ရောမ ၁၂း ၁၀။ ဆာလံ ၃၃း၃။ ဆာလံ ၁၄၉း ၁။
11.ခံယူချက်မတူတဲ့သူ ရေးတဲ့သီချင်းကို သုံးတာဟာ သူနဲ့ လက်တွဲတာ မဟုတ်ဘူး။ တူညီချက်ကို ထောက်ပြတာ ဖြစ်တယ်။ Not association but identification
သီချင်းပုံစံအရဖြစ်စေ၊ လောကီဆန်တဲ့ လတ်တလော အဖြစ်အပျက်တခုကို ကိုယ်စားပြုနေရင်ဖြစ်စေ ဒီသီချင်းမျိုးကို မသုံးသင့်ဘူး။ ဆိုမိရင်လည်း နောက်မဆိုတော့ဘူး။ တချို့ကလည်း ဆိုတဲ့အဆိုတော် နာမည်သိပ်မရှိတော့တဲ့ အချိန်အထိ ၅ နှစ် (သို့) ၇ နှစ်လောက် စောင့်ပြီးမှ သုံးတဲ့သူလည်း ရှိတယ်။ သတိထားပြီး သုံးတတ်ဖို့ လိုတယ်။
သီချင်းကောင်းကို လောကီဆန်တဲ့သူ ဆိုတာလည်း ရှိတတ်တယ်။ လောကီအဆိုတော်က “O Holy Night” နဲ့ “Amazing Grace” သီချင်းတွေကို ဆိုတာမျိုးပေါ့။ သူတို့ကြောင့်တော့ သီချင်းကို မပြစ်ပယ်သင့်ဘူး။
တခါ ခံယူချက်မတူတဲ့သူက ရေးပေမယ့် သူ့ခံယူချက်ကို ဘာမှမဆွဲတဲ့ သီချင်းမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ၊ Bill Gaither ရဲ့ “Because He Lives” သီချင်းဟာ သိပ်ကောင်းတယ်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း မြော်လင့်ခြင်းတွေ ပေးတယ်။ Bill Gaither ကို Conservative pastors တွေ သိပ်မကြိုက်ပေမယ့် သူ့သီချင်းကိုတော့ သုံးကြပါတယ်။ (The Longer I serve Him နဲ့ Sinner Saved by Grace စတဲ့ Bill Gaither ရဲ့ သီချင်းတွေဟာ ကောင်းပါတယ်။) ခံယူချက်လွဲနေပေမယ့် သီချင်းထဲမှာ အဲဒီခံယူချက်မပါရင် သုံးနိုင်ပါတယ်။
“The Savior Is Waiting” သီချင်းဟာ Ralph Carmichael ရေးတာလို့ သိရပါတယ်။ Carmichael ဟာ “Love Is Surrender” သီချင်းကို ရေးတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသီချင်းက Carpenter အဖွဲ့ ဆိုတော့ နာမည်ကြီးသွားတယ်။ the Carpenters အဖွဲ့က ၁၉၆၀ နှစ်တွေကနေ ၁၉၈၀ နှစ်တွေအထိ နာမည်ကြီးတဲ့အဖွဲ့ ဖြစ်တယ်။ “Love Is Surrender” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို မကြိုက်ပေမယ့်၊ “The Savior Is Waiting” သီချင်းကိုတော့ မဆိုဘဲ မနေနိုင်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီသီချင်းကို Ralph Carmichael နဲ့ the Carpenters တို့နဲ့ ပါတ်သက်တာကို လူတွေ သိပ်မသိကြတော့ဘူး။ ဒါက idea ပါ။
တချို့ကလည်း Fundamental တွေ ရေးတဲ့ သီချင်းပဲ ဆိုရမယ်လို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ Fundamental ထဲမှာပဲ ဘယ်ဟာ ကောင်းတယ်၊ ဘယ်ဟာ မကောင်းဘူး ပြောဖို့ ပုံသေနည်း မရှိပါဘူး။
တကယ်တော့ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ သိပ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတချို့ဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဘာမှမဆိုင်သူတွေ ရေးခဲ့တာပါ။ (Holy, Holy, Holy သီချင်းဟာ ရိုးမင်း ကက်သိုလစ်တယောက် ရေးတာပါ။ Blessed Assurance ဟာ မက်သဒစ် စစ်စစ် တယောက် ရေးတာပါ။ Amazing Grace က အင်္ဂလီကန် သင်းအုပ်တယောက် ရေးတာပါ။) မက်သဒစ်ရေးတဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုပေမယ့် လူက နှစ်ခြင်း ဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ ၂ ကော ၆း ၁၄။
12.သီချင်းရေးဆရာ တယောက်ရဲ့ သီချင်းတပုဒ်ကို သုံးတာနဲ့ သူ့သီချင်းအားလုံးကို ထောက်ခံရာ မရောက်ဘူး။
“It Is Well with My Soul” သီချင်းရေးတဲ့ Horatio Spafford ဟာ အဲဒီသီချင်း ရေးတုန်းက သူက ပရက်စ် ဘက်တီးရီးယန်းပါ။ နောက်နှစ်တွေကြာတော့ ကိုယ်ပိုင် Messianic အုပ်စုတစုကို ထောင်တယ်။ မိသားစုနဲ့ ယေရုရှလင်မြို့ကို ပြောင်းပြီး utopian အဖွဲ့ကို တည်ထောင်တယ်။ Universalist တယောက်ဖြစ်လို့ ထာဝရ တရားစီရင်ခြင်းနဲ့ ငရဲအပါအဝင် ကျမ်းစာရဲ့ သွန်သင်ချက်တွေကို ငြင်းပယ်တယ်။ ဒါပေမယ့် “It Is Well with My Soul” သီချင်းကို ဆိုတာဟာ သူ့ရဲ့ ပရက်စ်ဘက်တီးရီးယန်း၊ Universalist တယောက် ဆိုတာကို အားပေးရာ မရောက်ဘူး။ ဘုရားကို ချီးမွမ်းရင်း ယုံကြည်ခြင်းကို အားပေးရုံသာ ဖြစ်တယ်။
လူတယောက်ရဲ့ စကားကို ကိုးကားရင်လည်း သူပြောခဲ့သမျှ စကားအားလုံးကို ထောက်ခံရာ မရောက်ပါဘူး။
13.ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ခံစားသီဆိုတာ ဖြစ်ပေမယ့် ဟန်ဆောင်တာ၊ ပိုပိုကဲကဲ လုပ်တာတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
လောကီအဆိုတော်တွေရဲ့ ဆိုပုံဟန်ပန်တွေကို အတုခိုးဆိုနေတာနဲ့ ဘုရားကို မိတ်ဖွဲ့ဆိုနေတာဟာ မတူပါဘူး။ ၂ ရာ ၆း ၁၆။ ဘုရားအကြိုက်ထက် လူကြိုက်ဖို့အတွက် ဂီတကို အလျှော့ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ သိပ်ပြီး စည်းကမ်းကြီးပြီး ဖါရိရှဲလို ခံယူနေဖို့လည်း မကောင်းဘူး။ ရောမ ၁၄း ၃။
14.သင်းအုပ်က သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ လမ်းပြမှုကို ခံယူရပါမယ်။
နှစ်ခြင်းတွေက ခရစ်တော်ရဲ့ လမ်းပြမှုအတိုင်း အသင်းတော်သွားရမယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ သင်းအုပ်ဆရာ တယောက်နဲ့ တယောက် အကြိုက်တော့ မတူနိုင်ဘူး။အသင်းတော် တပါးနဲ့တပါး သီချင်း ဆိုလေ့ရှိတာချင်း မတူနိုင်ဘူး။ နေရာ ဒေသနဲ့ တခြားအချက်အလက်တွေကြောင့် သီချင်းသဘာဝ ကွဲပြားနိုင်တယ်။ တနေ့မှာတော့ သင်းအုပ်ဆရာဟာ သူအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အသင်းတော်ရဲ့ သီချင်းတွေအတွက် သခင်ဘုရားရှေ့မှာ အစစ်ခံရလိမ့်မယ်။ ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ လမ်းပြမှုကို ခံယူမှုနဲ့ ကျမ်းစာနဲ့ ညီ,မညီ စတာတွေ အစစ်ခံရမယ်။ တမန် ၂၀း ၂၈။
15.မတူတဲ့နေရာလေးတွေ ရှိတတ်ပေမယ့် သြဝါဒမှန်မယ်၊ ခရစ်တော်ကို ဦးထိပ်ထားတဲ့ သီချင်းတွေကို ဦးစားပေးရမယ်။
အခုပြောတဲ့အတိုင်း အားလုံးခံယူရမယ်လို့ မပြောလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် အသင်းတော်ရဲ့ အဓိကဟာ ဧဝံဂေလိပါ။ သီချင်းမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သတိပြုရပါမယ်။ မဿဲ ၂၈း ၁၉- ၂၀။
သင်းအုပ်တယောက်နဲ့ တယောက် မတူနိုင်ဘူး။ အားကြီးသူ ရှိမယ်။ အားနည်းသူလည်း ရှိမယ်။ ဂီတကလည်း ငြင်းခုံစရာတွေ များတယ်။ ဒါပေမယ့် အသေးအမွှားတွေကို ထားပြီး တယောက်နဲ့ တယောက် အသင့်အတင့် နေတတ်ရမယ်။ ရောမ ၁၄း ၁၀၊ ၁၇- ၁၉။
သီချင်းအကြောင်းပြောရာမှာ တယောက်နဲ့ တယောက် အပြစ်ရှာနေကြတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရားဘုန်းထင်ရှားဖို့သာ ဦးစားပေးကြရမယ်။
ခရစ်တော်အတွက်သာ အဓိကဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ့်အသင်းတော်ကြီးလာဖို့ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အခုအချက်အလက်တွေက အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါတယ်။
သီချင်းကလည်း မှန်ဖို့ လိုသလို၊ တဖက်ကလည်း မေတ္တာမပျက် သဘောထားကြီးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျမ်းစာအရကတော့ ယုံကြည်သူဟာ ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ အသက်ရှင်ရမယ်။ ဝိညာဉ်သဘောရှိတဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုရမှာပါပဲ။ အသက်တာမှာ ဘုရားအတူရှိကြောင်း ရောင်ပြန်ဟပ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ ဧဖက် ၅း ၁၈- ၁၉။
Posted by Papa at 10:29 AM
Labels: Paul Chappell, သီချင်း
Lordship Salvation? A Perversion of the Gospel By Dr. Curtis Hutson အခြားသော ဧဝံဂေလိ
Dr. Curtis Hutson သခင်အဖြစ် ဝန်ခံမှ ကယ်တင်ခြင်း ရမယ်ဆိုတဲ့ အခြားသော ဧဝံဂေလိ “ လူနှင့်မစပ်ဆိုင်၊ လူ၏အခွင့်မရှိဘဲလျက်၊ ယေရှုခရစ်၏အခွင...
Peaceful Pa: App for Android Phones အတွက် သုံးရန်
မပြောင်းလဲတဲ့ အချစ် Unchanging Love
Unchanging Love -- မပြောင်းလဲတဲ့ အချစ် ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာဆိုတာ အဖေတယောက်ရဲ့ အချစ်မျိုးနဲ့ တူပါတယ်။ လူတေ...
ခရစ်စမတ် လက်ဆောင် ဝေစာ
GOD’S GREATEST GIFT ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ ခရစ်စမတ်လက်ဆောင် လူတွေအတွက် အရေးအကြီးဆုံး၊ အလိုအပ်ဆုံး၊ တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံး၊ ...
လက်ဆေးနည်း လက်ကို ရေနှင့်ဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးပါ။ ကူးစက်ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ သန်ကောင်၊ တုတ်ကောင်၊ တုတ်ကွေး၊ အအေးမိ၊ အသဲရောင် အသ...
အစားအစာနဲ့ အာနိသင် The functions and Foods of Vitamins and Minerals Vitamins ဗိုက်တာမင်များ Vitamin A = အဖျားအနာကို ခုခံပေးသည်။ အ...
သခွါးသီး - Cucumber
သခွါးသီး - Cucumber သခွါးသီး - - - ကယ်လိုရီလျော့နည်းစေပါတယ်။ အသားအရေစိုပြေစေတယ်။ ၀မ်းပျော့စေတယ်။ အဆစ်အမြစ်ရောင်တာကို သက...
10. THE BELIEVER AND CRITICISM ယုံကြည်သူနဲ့ ဝေဖန်ရေး (BREAD FOR BELIEVERS by Dr. Curtis Hutson)
Dr. Curtis Hutson --------------------------------------------------------------------------------------------------- အခန်း ၁၀ ---------...
Rapture ခရစ်တော်ကြွလာတော့မယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ်မှုများရဲ့ အမှား " ထိုအချိန်နာရီကိုကား အဘယ်သူမှမသိ။ ကောင်းကင်တမန်မသိ။ ငါ့ခမည်းေ...
Hyles, 5, JONATHAN AND DAVID
JONATHAN AND DAVID ဒါဝိဒ်နဲ့ ယောနသန် by Pastor Jack Hyles (Chapter5from Dr. Hyle's excellent book, Blue De...
Depression စိတ်ဖိစီးမှု ရဲ့ လက္ခဏာများ
စိတ်ဖိစီးမှုရဲ့ လက္ခဏာရပ်များ ၁။ အပြုအမူ နှေးလွန်းခြင်း (သို့) သွက်လွန်းခြင်း (Hyper activity) ၂။ ဒေါသထွက်လွယ်၊ စိတ်ဆိုးလွယ်ခြင်း။ ...
Hyles, 6, DANIEL'S SPIRIT ဒံယေလ
DANIEL'S SPIRIT ဒံယေလရဲ့ ဝိညာဉ်စိတ်အားကြီးခြင်း by Pastor Jack Hyles (Chapter6from Dr. Hyle's excellent book...